I-Gloxary Forex | FXCC
Ingxelo yeNkcazo yeAkhawunti
Ingxelo yenkcazo yeakhawunti yeFXCC ibonisa yonke intsebenzo eyenziwa kwi-akhawunti yezorhwebo ngexesha elide. Umzekelo; zonke iirhwebo (umyalelo) umthengi uthatha / angena kwiimarike, indleko yecala ngalinye, ibhalansi yebhanki ngexesha elithile kunye ne-balance balance after each action on account is accounted.
Ixabiso langoku le-akhawunti yomthengi, oku kubandakanya ukulingana okupheleleyo (imali yemali esetyenzisiweyo / eseleyo kwi-akhawunti) kunye nayiphi na inguqu ngenxa ye: iingeniso kunye nokulahlekelwa kwiindawo ezikhoyo kunye nezivaliweyo, iikhredithi kunye nezikweletu ezivela kwii-rollovers zemihla ngemihla, kunye neentlawulo ukusuka kwimisebenzi efana ne: iikomishoni, iifizi zokudlulisa, okanye iifizi ezihambelana neebhanki, ukuba loo ntlawulo ifanelekile.
Umgaqo-nkqubo wokutshintshiselwa owamkelwa yibhanki ephakathi. Imali yesizwe "i-pegged" (echanekileyo) kwimali enkulu (imali enamandla, njengeDola okanye iYurophu). Umzekelo osandul 'ukwenziwa ube ngumkhonkwane weFrank franc kwi euro. Ingxowa ingatshintshwa, ngokuqhelekileyo njengeziphuculo kwisimo sokukhuphisana kwelizwe kwimarike yokuthumela ngaphandle.
ADX; isalathisi esilawulayo
I-Index ye-Moveverage Directional Movement Index (ADX) yenzelwe njengesalathisi sokurhweba ukuseka amandla omgangatho ngokulinganisa ukunyuka kwexabiso kwinqanaba elilodwa. I-ADX inxalenye yenkqubo ye-Directional Movement eyenziwe yashicilelwa nguJ. Welles Wilder kwaye isingqinisiso esiphumela kwii-Indicational Movement indicators.
Oku kuhambelana neSivumelwano seThengi seTekisi. Bonke abathengi kufuneka bafunde baze bamkele imigangatho yezoshishino ngokusayinela (ngekhompyutha xa kuyimfuneko) Isivumelwano somthengi seFXCC, ngaphambi kokuvula i-akhawunti kunye neFXCC.
Isicwangciso sokuthengisa seFXCC.
I-Interface yoKwenza isicelo-API
Olu luphawu olwenza ukuba inkqubo yesofthiwe ixubane kunye nezinye iinkqubo zesofthiwe. Ngokubhekisele kwi-forex yorhwebo, i-API ibhekisela kwi-interface, eyenza iqonga lidibanise ne-Forex market. I-API iqulethe iimpawu zophuhliso ezivumela ukwabelana ngolwazi, njengokuthi: Ixesha langempela leengcaphuno zentengo kunye nee-oda zorhwebo / ukwenza.
Inani lexabiso lemali liyakhula, okanye liqinisa, ekuphenduleni ukuphuhliswa kwezoqoqosho kwaye ngoko iimpendulo zentengiso.
Leli gama elisetyenzisiweyo xa abathengisi bezinto zangaphambili bathengisa kunye nokuthenga izinto ezifanayo (okanye ezilinganayo) zemali ngenjongo yokufumana inzuzo kwixabiso okanye / kunye neendleko zemali.
Ixabiso apho imali, okanye isixhobo esinikwe ngokuthengiswa nguFXCC, okanye elinye iqela eliphambili. Ixabiso lokubuza okanye ukunikezela ngempumelelo intengo umthengi uya kucatshulwa xa ezama ukuthenga okanye ixesha elide.
Naluphi na into enelungelo lokutshintshiselwa.
ATR; udidi lwe nyaniso
Isilinganiselo seNyaniso yeRange (ATR) isalathisi silinganisa ubungakanani bexesha phantsi kohlu lokubheka, ngokuqwalasela nayiphi na igalelo ekupheleni kwexesha elide lokurhweba.
Umthengisi owamkelekileyo kunye nomqondiso welizwe owamkelwayo / kwikota, kwi-AUD / USD currency pair.
Le yinkampani yesithathu apho umthengi unikela igunya lokuthengisa, okanye unikezela ukulawula phezu kweakhawunti yomthengi. I-FXCC ayifuni, ngokubaluleka okanye ngenye indlela, ivumela okanye ivume iindlela zokusebenza zommeli ogunyazisiweyo. I-FXCC ngoko ayifumani mthwalo uxanduva lommeli ogunyazisiweyo.
Esi sicwangciso sokurhweba apho imiyalelo ifakwe ngokuzenzekelayo yinkqubo, okanye inkqubo, edlalwa ngokusetyenziswa njengabacebisi ngeengcali okanye ii-EAs, ngokuchasene nomthengi ngokubeka ngesandla amashishini / amagosa abo kwiimarike ngokusebenzisa iqonga lawo. Ukuthengwa okanye ukuthengisa iilawuni kuhanjiswa kwiimarike yenkqubo ekufuneka yenziwe xa iipameters ezibekwa yinkqubo yomthengisi, ekugqibeleni zidibene.
Umyinge wemali yehora
Imela inani eliqhelekileyo lokuba abasebenzi bahlawulwa ngeyure ngenyanga enikeziweyo.
Isebe le-Back Office le-FXCC lijongene nokusekwa kweakhawunti, ukunikezelwa kwemali kwiakhawunti yomthengi, imiba yokuxolelana, imicimbi yomthengi kunye nayiphi na imisebenzi emalunga nemisebenzi engahambelani ngokuthe ngqo ukuthengwa okanye ukuthengiswa kweebini zemali.
Iyindlela apho iqhinga lokurhweba livavanywa ngokusebenzisa idatha yembali ukuze kuqinisekiswe ukuba inkqubo yokurhweba iyasebenza, ukwenzela ukuba ugweme ingozi yokurhweba ye-capital capital.
Ingxelo isishwankathela umahluko kwixabiso elipheleleyo phakathi kweentlawulo kunye nokuphuma kwelizwe ngexesha elichaziweyo. Kukwaziwa nangokuthi ibhalansi yeentlawulo zamazwe ngamazwe njengoko kubandakanya ukuthengiselana phakathi kwabemi belizwe kunye nabangabonisi.
Ukulinganisela koRhwebi, okanye ukuLungiswa koRhwebo
Ukwahlukana phakathi kokungeniswa kwelizwe kunye namazwe angaphandle kwixesha elithile. Kwakhona inxalenye ebaluleke kakhulu kwi-akhawunti yangoku yelizwe. Kwimeko apho ilizwe lithengisa ixabiso elingaphezulu kunezinto ezingeniswa kuyo, ngoko ilizwe lifumana intsalela yezorhwebo, kwaye ngokulandelelana, ukuba ilizwe lisesimweni sexesha elide lorhwebo (i-gap trade) okanye buthathaka, ukwenza iindleko zokungeniswa kwexabiso ezibizayo kunye nokuthengiswa kwexabiso elincinci kumaqabane oshishino.
IBhanki yeZizwe zamaZwe ngamaZwe (BIS)
Yimibutho yezemali yamazwe ngamazwe ekhuthaza intsebenziswano yeebhanki eziphambili ngenjongo yokukhuthaza ukuzinza nokukwabelana ngolwazi phakathi kweebhanki ezinkulu zehlabathi. Enye injongo kukuba yintloko ebalulekileyo kuyo yonke uphando loqoqosho.
Ukuchazwa njengomgca wekhredithi owanikwa yibhanki kumxhasi, oku kudla ngokuba kuthiwa "umgca".
Usuku loBhanki (okanye usuku lweShishini)
Usuku lwebhanki ngumhla webhishini webhbanki. Iquka zonke iintsuku xa iiofisi zebhanki zivulelwe ishishini kuluntu, apho ibhizinisi liquka yonke imisebenzi yasebhanki. Usuku lwebhanki rhoqo imihla yonke ngaphandle kweMigqibelo, ngeCawa kunye neeholide ezichazwe ngokomthetho.
Ibhanki yaseJapan (BOJ)
Ibhanki ephakathi yaseJapan.
Zingasetyenziselwa njengento elinganayo yemali kunye nephepha elikhutshwa libhanki eliphambili njengoluhlobo lwesixhobo sokuthintana (incwadi yesigxina), ehlawulwa kumthengi ngokufunwa.
Inzala yenzalo esekelwe kuyo ibhanki ephakathi iboleka imali kwi-banking system yasekhaya.
Oku kubhekiselwa kuyo njengowokuqala kwemali kwididi yemali. Imali ye siseko ikwayimali apho umtyalomali (umkhupheli), agcina incwadi yayo yeakhawunti. Kwiimarike ze-FX, iDola ye-US ngokuqhelekileyo ithathwa njengowona mali esisezantsi kwisininzi seengcaphuno zeFX; Iingcaphuno zichazwe njengeyunithi ye-$ 1 USD, ngokumalunga nolunye uhlobo lwemali olucatshulwe kwibini. Imisebenzi engekho kule ngqungquthela yile: i-British Pound, i-Euro ne-Dollar yase-Australia.
Ireyithi yesiseko isantya somdla ukuba ibhanki enkulu, njengeBhanki yaseNgilani okanye i-Federal Reserve, iya kuhlawulisa ukuboleka imali kwiibhanki zorhwebo. Umngcipheko onobungozi boboleki baya kubhatala imali encinci phezu kwesantya sezinga, ababoleki bekhwalithi emncinci baya kuhlawula umgangatho ophuculweyo, ngaphezu kwezinga lesiseko.
Ipesenti enye yepesenti enye. Umzekelo; umahluko phakathi kwe-3.75% kunye ne-3.76%.
Ixabiso elichazwe kwizinga lokubuyisela ngonyaka okanye ngokwemveliso yokukhula kwesivuno endaweni yexabiso ngokwemali.
Imarike ye-Bear yimeko yemarike apho kukho ixesha eliqhubekayo (ngokuqhelekileyo) ukuhla kwamanani emveliso ethile.
Utshintsho kwimeko yeemarike apho abatyala-mali kunye / okanye abathengisi, abasemfutshane kwimveliso yotyalo-mali, kufuneka babuyisele imali engaphezulu kunokuba bathengise kuyo, ngaphandle koko ukunyuka kwemeko yemakethe kuya kubangela ukulahlekelwa i-akhawunti, okanye yorhwebo ngamnye. Ibhere elidibanisayo lingenza isiganeko samazwe ngamazwe adalwe kwiimarike zotyalo-mali, ngokuqhelekileyo ngamabhanki amakhulu okanye abenzi bemarike.
Umtyalo-mali okholelwa ukuba intengo yomthamo-mali uya kuwa.
Incwadi ethi Beige iyigama eliqhelekileyo elisetyenziselwa ingxelo yeFed, eyapapashwa ngaphambi kokuba umhlangano we-FOMC kwizinga lentengo. Kufumaneka kumaxesha asibhozo karhulumente (8) ngamaxesha ngonyaka.
Ixabiso apho i-FXCC (okanye elinye iqela lomncintiswano) linikezela ukuthenga ibini leemali ukusuka kumthengi. Yimali umthengi uya kucatshulwa xa efuna ukuthengisa (ukufutshane) isikhundla.
Ibhidi / Cela Ukusabalala
Ukwahlula phakathi kwebhidi kwaye ubuze intengo.
Ubhekisela ngokuqhelekileyo kwiimpawu zokuqala ezimbini okanye ezintathu zexabiso lemali. Umzekelo; Ixabiso le-EUR / i-exchange exchange .9630 ichaza '0' njengowokuqala. Ngoko ke ixabiso liza kuba yi-0.9630, kunye "nomfanekiso omkhulu" ngu 0.96.
IBollinger Band (BBANDS)
Isibonakaliso sobugcisa esilinganisa ukuzithemba, esenziwe nguJohn Bollinger. Banikezela inkcazo enxulumene nephakamileyo nephantsi, apho singakwazi ukugcina amaxabiso anjengokuphakama kumgangatho ophezulu kunye nezantsi kwiqela eliphantsi.
Ukuphula, okanye UkuPhula
Ukuqhawula iyigama elisetyenziselwa ukuchaza ngokukhawuleza, ukunyuka okukhawuleza (okanye ukuwa) kwintengo yesitya esikhokelela ekuphumeni kwinqanaba elithile elixhaswe okanye inkxaso.
Isivumelwano seBretton Woods se-1944
Esi sivumelwano 'se-WWII isivumelwano esiye sabangela izinga lokutshintshiselwa ngokuchanekileyo kwaye ibeke intengo yegolide. Isivumelwano senziwe phakathi kwabathunywa abavela kwiintlanga-hluko ezizimeleyo ezimela ubutyebi obukhulu behlabathi.
I-arhente, efana neFXCC, oqhuba iilawulithi zokuthenga nokuthengisa iimveliso zemali, njenge: zemali kunye nezinye izixhobo ezihambelanayo, nokuba kukho ikhomishini, okanye inzuzo ekusabalaleni.
Ukwakha (iiNdlu) Imvume
Inani leeprojekthi zonyango ezandisiweyo ezinikezwe urhulumente okanye elinye iqumrhu elilawulayo ngaphambi kokuba ukwakhiwa kwangoku kungene ngokusemthethweni.
Ixesha elide lokunyuka kwamaxabiso emveliso ethile yotyalomali.
Umtyalo-mali okholelwa ukuba amaxabiso emveliso ethile yotyalo-mali iya kuphakama.
Inkulu yeBhanki yaseJamani.
Usuku lo shishino
Nayiphi na imini xa iibhanki zorhwebo zivulekileyo zoshishino, ngaphandle kweMigqibelo okanye ngeCawa, kwiziko lemali eliyinhloko lizwe.
Umyalelo obandakanya imiyalelo ekhethekileyo yokuqhuba ukuthengiselana ukuthenga i-asethi kwinqanaba elithile okanye ngaphantsi. Awusebenziswanga de ixabiso lentengiso (okanye liphantsi) inani lemida. Umyalelo wokuthenga umda wenziwa ngokukhawuleza, uba ngumyalelo wemakethi ukuthenga kwixabiso lentengiso ekhoyo.
Ukumisa ukuthenga ngumyalelo wokumisa obekwe phezu kwexabiso elikhoyo lokusebenza ngoku, akusebenziswanga ukuba ixabiso lemali libuze (okanye ngaphezulu) intengo yokuma. Ukuthengwa kwe-stop stop once, kwaba ngumyalelo wemakethi ukuthenga kwixabiso lentengiso ekhoyo.
Eli lizwi elisetyenziselwa kwimarike yokutshintshwa kwamanye amazwe ngezinga le-USD / GBP.
Uhlobo lwetshathi elinamabhulokhi afana nokubukeka kwamakhandlela. Ibonisa intengo ephakamileyo nephantsi, kunye namaxabiso okuvula nokuvala.
Isixa esinokuthi sikhankanywe okanye sihlawulwe kwi-akhawunti ekubambeni isibini semali apho ixabiso lentlawulo yehorensi yamanqaku ehlukeneyo.
Ngokwezivumelwano ze-Forex, ukuthengiswa kweqhinga kukucwangcisa isicwangciso-mali apho umtyalo-mali eboleka imali ngezinga elincinci lomdla, ukuze atyalole kwi-asethi enokubakho ukubuyisela phezulu. Esi sicwangciso siqheleke kakhulu kwimarike yokutshintshiselana kwamanye amazwe, xa amaxabiso eebhanki eziphambili ahlukeneyo.
Le yinto efanayo yokuhlaliswa kwembopheleleko.
Ukubhekiselele kwintengiselwano yokutshintshiselwa kulungiswe ngomhla wokuthengiselana ngawo.
Ingxowa kwidiphozithi iyahambelana nemali yemali egcinwe kwi-akhawunti, ngokuqwalasela i-joint or minus yezikhundla ezivaliweyo ezifihliweyo, inzuzo kunye nokulahleka, kunye nezinye izikweletu, okanye iikhredithi, ezifana ne-rollovers kunye nekhomishini (ukuba kukho naziphi na sebenza).
CCI, Index Index
I-Index ye-Channel Index (CCI) ithelekisa intengo ekhoyo yamanje kwimarike kunye nexabiso eliqhelekileyo lithetha intlawulo egcinwe kwi window ye-20.
Ibhanki, enoxanduva lokulawula umgaqo-mali welizwe okanye imimandla. I-Federal Reserve yi-bhanki ephambili ye-United States, i-European Central Bank ibhanki ephakathi yaseYurophu, iBhanki yeNgilani ibhanki eliphambili laseNgilani kunye neBhanki yaseJapan yibhanki ephakathi yaseJapan.
Isenzo apho ibhanki ephakathi, okanye ibhanki ephakathi ingena kwimarike yokutshintshiselana kwamanye amazwe ngenzame yokuphazamisa ukunikezela kunye nokufuna okungaqinisekiyo, ngokuthenga ngokuthe ngqo (okanye ukuthengisa) utshintshiselwano lwangaphandle.
IKomishoni yokuThengiswa kweeNkxaso zeeMveliso, eli liziko le-US elilawulayo lolawulo lwexesha eliza kuthengiswa kwiimarike zemveliso, kuquka i-future financial.
Leli gama lisetyenziswe xa ixabiso liqulethwe phakathi kweendlela ezimbini ezifanayo (inkxaso kunye nokumelana) ngexesha elithile.
Oku kucatshangelwa ukuba ngumntu ophonononga ulwazi olusichasayo kunye needati zeenkcukacha zembali, ukuze uzame ukujonga iindlela, okanye iipatheni zokunyuka kwexabiso, eziza kunceda ukuqikelela isalathiso kunye nokungazithobeli kwemveliso ethile. Luhlobo oluthile lwenkqubo yokuhlalutya lobugcisa.
I-CHF yisisombululo se-Swiss franc, imali yaseSwitzerland neLiechtenstein. I-franc yaseSwitzerland ibizwa ngokuba yi "Swissie" ngabathengisi beemali.
Iimali ezifumaneka ngokukhululekile, ezibangelwa ukuhlaliswa kwezorhwebo, okanye ezohwebo.
Umxhasi okanye uMthengi
Umnini-akhawunti we-Akhawunti ye-FXCC. Umthengi, okanye umnini-akhawunti unoku: umntu, umphathi wezemali, iqumrhu lequmrhu, i-akhawunti ye-trust, okanye nayiphi na into esemthethweni enomdla kwixabiso kunye nokusebenza kwe-akhawunti.
Isikhundla esivaliweyo sibhekisela kwisikhundla esisekho njengoko umthengisi ephuma kwiimakethi phantsi kobulumko bakhe. Ngokomzekelo, indawo yokuthengisa izakukhutshwa ngokugqithiswa ngendawo yokuthenga kunye nangona kunjalo.
Umrhumo umthengisi onjengeFXCC unokuhlawula ishishini ngalinye.
Kukho iimbini ezintathu zeprenx ezibandakanya iimali ezivela kumazwe anemali enkulu yempahla / iindawo zokugcina amaminerali. Iimbini zeempahla ziyi-USD / CAD, i-USD / AUD, i-USD / i-NZD. Iibini zombini zintengiso zihambelana kakhulu neenguqu kwixabiso lemveliso. Abahwebi bafuna ukufumana ukutshintshwa kweemveliso zeemveliso zeempahla, bahlala bekhangelelanisa ukuthengisa ezo zibini.
Ikhompyutheni, okanye ifayili eprintwe ngabafana abachazela zonke iinkcukacha ezichaphazelekayo zokuthengiswa kwemali.
Ukuhlanganiswa lixesha elisetyenziselwa ukuchaza ixesha apho amaxabiso angaphantsi kwaye ahamba ecaleni.
Umlinganiselo wezinga elipheleleyo lokuzithemba ngeenxa zonke zeemeko zemali kwiimeko zoqoqosho kunye nomntu ngamnye wezezimali.
Oku kuchazwa njengemilinganiselo yenyanga yenguqu kwinqanaba lentengo yebhaksi yempahla yabathengi, ngokuqhelekileyo kubandakanywa: ukutya, izambatho kunye nezithuthi. Amazwe ahluke kwiindlela zabo zokuhlawula imali kunye nemali yokuthenga imali.
Ukuqhubela phambili yimiqathango esetyenziswa kakhulu xa kulindeleke ukuba umendo uya kwandisa inkambo yayo.
Isivumelwano se-OTC (Over Coun Counter) esenziwe nge-FXCC ukuthenga okanye ukuthengisa isixa esithile semali ethile, ngenani elithile lenye yemali, apho ukuhlaliswa kusekwe ngomhla oxabisekileyo (ngokuqhelekileyo umhla wendawo). Izinga lokutshintshiselwa kwamanye amazwe ukuba amaqela amabini ahlawulwe ukuba athathe ixabiso lemvumelwano.
Izinga elisetyenziselwa ukuguqula iipresenti zeerandi ze-US ezingamanye amazwe / ilahleko kwiidola, ekupheleni kosuku ngalunye lwezorhwebo.
Imali enokuthengiswa ngokukhululekile kwezinye iirhafu ngaphandle kwemimiselo yokulawula. Ngokuqhelekileyo zidibaniswa nezoqoqosho ezivulekileyo nezizinzile, kwaye amaxabiso abo azinqunywe ngokunikezelwa kunye neemfuno kwiimarike zerhwebo lwangaphandle.
Kuyinto intshukumo ejikelezayo kwaye imigaqo isetyenziselwa ukuchaza intshukumo yentengo ngexesha lokuguqulwa okukodwa kwendlela.
Ummeli webhanki wangaphandle, onika iinkonzo egameni elinye iziko lemali, elingenayo igatsha kwiziko elifanelekileyo lemali, umzekelo; ukuququzelela ukudluliselwa kwemali okanye ukuqhuba iintengiso zezoshishino.
Imali ye sibini kwimbini yemali. Umzekelo; kwidiyari yemali ye-EUR / USD, imali ye-counter is USD.
Umntu okanye ibhanki ethatha inxaxheba kwichitshintshi yemali yehlabathi kunye nomgcini-phantsi wekhontrakthi njengemali mboleko.
Libhekisela kwimeko yokuba ilizwe lilungelelanise okanye lichaphazele ixabiso lemali. Ixabiso lentengo kumyalelo wokunciphisa ukuthengisa kufuneka libe ngaphezu kwexabiso lokuthengiswa kwezinto ezikhoyo ngoku kubandakanya uviwo lwezoqoqosho, ezopolitiko kunye nemeko yelizwe elithile, ukuze kuqinisekiswe ukuzinza kwayo.
Ukwenza intsebenzo ekugqibeleni ivala isithuba.
Oku kwabizwa nangokuthi "isikhonkwane esilungiswayo". Oku kuchazwa njengendlela izinga lokutshintshiselwa kwelizwe lisetyenziswe, ngokumalunga nolunye uhlobo lwemali.
Ikhontrakthi yeMali yomnqamlezo
Inkontileka yendawo yokuthenga, okanye ukuthengisa imali enye yangaphandle, ngokutshintshela enye imali yangaphandle. Iindleko ezitshintshiweyo aziyi-Dollar yase-US.
Imali engabandakanyi i-USD.
Izinga lokutshintshiselana phakathi kweebhanki ezimbini, nokuba yiyiphi imali esemthethweni yelizwe kwaye zombini zichazwe ngokwemali yesithathu.
I-Cryptocurrencies idijithali, iimali zee-virtual usebenzisa i-cryptography ukwenzela ukhuseleko lomthengi. Njengoko ingakhange ikhutshwe ngamabhanki angundoqo, okanye oorhulumente ubhekiselwa ekubeni yintlobo yezinto eziphilayo, ezithintekayo kwi-theory, zikhusela ukuphazamiseka kukaRhulumente, okanye ukuphathwa, njengeBitcoin.
Yona isinyithi okanye iphepha lephepha, xa kusetyenziswa okanye ukujikeleza, njengentsingiselo yokutshintshiselana, ngokukhawuleza ukujikeleza iibhanki kunye neengqekembe.
Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ukunciphisa umngcipheko wokuchithwa kwemali, kwaye kubhekiselwa kuyo njengekhetho lwemali apho umlinganiselo olinganisiweyo webhaskithi isetyenziselwa ukulinganisa ukubaluleka kokuzinikela kwemali.
Yinkqubo yekhompyutheni esetyenziselwa ukuguqulwa kwemali; i-calculator eguqula ixabiso lentengo enye kwixabiso lenye imali. Umzekelo; idola ukuya kwi-euro. Abaguquleli kufuneka basebenzise iicatshutshana zakutshanje zakwamashishini atshintshwe kwamanye amazwe.
Izinketho zeemali zinika umthengi ilungelo, kodwa azibophezeli, ukutshintshisisa imali echanekileyo yemali ebhalwe ngemali enye ibe yinye ngentlawulo echanekileyo ngomhla ochaziweyo.
Ichazwe njengeemali ezimbini kwiintengiso zangaphandle. 'I-EUR / USD' ngumzekelo weebini zemali.
Umngcipheko wokutshintsha okungahambi kakuhle kwizinga lokutshintshiselana.
Ezi zezi zihlomelo zethathu ezidalwe yi-ISO (Intlangano yelizwe jikelele ngokumisela) kwaye isetyenziswa ngokutsha endaweni yamagama apheleleyo eemali. Umzekelo: USD, JPY, GBP, EUR, ne-CHF.
Inyunyana ebhekiswe kumanyano wemali yi-Eurozone. Yesivumelwano phakathi kwamazwe amabini okanye angaphezulu ukwabelana ngemali efanayo (okanye ikhonkco), ukwenzela ukuba kugcinwe izinga lokutshintshiselwa ukugcina ixabiso lemali kwizinga elithile. Amalungu omanyano abuye ahlanganyele kunye nomgaqo-nkqubo wokutshintshiselana ngemali kunye nakwamanye amazwe.
Isicelo seAkhawunti yeMthengi
Inkqubo yesicelo seFXCC apho bonke abaxhasi kufuneka bazalise kwaye bangenise ukwamukelwa yi-FXCC, ngaphambi kokuba kwenziwe intengiso.
Ukunqunyulwa kwemihla ngemihla (ukuvalwa kwosuku lomsebenzi)
Le ngongoma enye ngexesha, ngexesha lomsebenzi othile, emele ukuphela kwaloo mini shishini. Umhla wokurhweba ngawo nayiphi na isivumelwano esiye yangena emva kokunqunyulwa kwansuku zonke, ithathwa njengento eyenziwa ngomhla olandelayo woshishino.
Ukuthenga okanye ukuthengisa umyalelo ukuba ukuba awukwenziwanga ngosuku oluthile, ukhanselwa ngokuzenzekelayo.
Libhekisela kworhwebo kunye novulekileyo kwaye luvaliwe ngosuku olufanayo.
Abaxeli kunye nabathengisi abathatha isikhundla kwiimveliso zotyalo-mali, eziye zahlanjululwa ngaphambi kokuvalwa komhla wokurhweba omnye, zichazwe njengabarhwebi bemini.
Abahwebi banokukhetha ukugcina iirekhodi zazo zonke iintengiso ezenziwa ngexesha elithile. I-blotter yesiqhelo somntu siqukethe zonke iinkcukacha ezisisiseko ezichaphazelekayo. I-forex yokuthengisa umthengisi inokubandakanya ulwazi olunjengezikhundla zemali zokuvula nokuvala, eziqaliswe ngumthengisi.
Ngumhla apho umthengi uvunyelwene ngawo.
Iimarike ze-Forex zivulekile 24 / 5, ngoko ke amaziko amaninzi aqhuba iifisi kwiindawo ezahlukeneyo. Ukuqhuba iifisi kuyafumaneka ngaphandle kweemarike zangaphambili; kwiibhanki nakwiinkampani zezemali, ukwenzela ukuba kwenziwe amashishini kwiziqinisekiso ezininzi. Ukuqhuba iifisi kuma-broker firms, xa kuthengisa i-forex njengomthengisi weentengiso, zihlala zibeka izicatshulwa zazo kwaye zisasazeka xa zinika ukuthengiswa kwangaphambili kubathengi babo, ngokuchasene nokufikelela kwimarike ngqo, nangona kunjalo, ngokuchanekileyo ngokusebenzisa iindlela zokucwangcisa.
Le ndlela yindlela ephambili yokurekhoda ulwazi olusisiseko malunga nokuthengiswa kwemali.
Umntu (okanye oqinileyo) osebenza njengenqununu, kungekhona njenge-arhente, kwintengiselwano yokutshintshiselana kwamanye amazwe (ukuthenga okanye ukuthengisa). Abadayisi bathengisa inzuzo yabo, bathengise i-akhawunti yabo / kwaye bathathe ingozi yabo.
Oku kuchazwa njengophulaphula isivumelwano semali.
Ibhalansi engalunganga yorhwebo.
I-DEMA, (umlinganiselo wesibini ohamba phambili)
Eyadalwa nguchwephetha uPatrick Mulloy, umlinganiselo we-Double Exponential Moving Medium (DEMA) uzama ukubonelela umyinge ongciniweyo ngokubala indlela yokwenza umlinganiselo osheshayo, mhlawumbi unomlinganiselo ongaphantsi kunomlinganiselo oqhelekileyo ohambayo wokuhamba. Ukubala kunzima kakhulu kunomlinganiselo ohambayo.
Ukuhla kwexabiso lemali ehambelana nezinye iirhafu, ngenxa yemikhosi yemarike.
Lo ngumlinganiselo wobukhulu bomthamo kwaye luphawu lobutyebi obufumanekayo ngenjongo yokuthengisela (njengomzekelo) ididi ethile yemali, kwindawo ethile ngexesha.
Ngokumalunga nokuthengiswa kwemali yile ngcaciso efunekayo ukuze kugqitywe ukuthengiswa kwemali yelizwe langaphandle, umzekelo; igama, izinga, kunye nemihla.
Ukuhlaziywa kukuhlawula kwexabiso lemali yelizwe ngokumalunga: enye imali, iqela leemali, okanye njengomgangatho. Ukuhlaziywa yiprogram yemigaqo-mali esetyenziswe ngamazwe anezinga lokutshintshiselwa ngokuchanekileyo, okanye izinga lokutshintshiselwa ngokulinganayo. Ukuhlaziywa kuphunyezwa nguRhulumente kunye nebhanki ephakathi ekhupha imali. Izwe liyakwenza imali yalo, umzekelo, ukulwa nokungalingani kwezohwebo.
Lo ngumfanekiso obalwa njengemali yentela kunye naziphi na izithembiso zokuchitha imali.
Ukuchithwa kungabonakalisa okanye kukubi kwaye kuyimpawu yokutshintsha kwindlela yokunyuka kwentengo.
Deutsche Mark. Imali yangaphambili yaseJamani ngaphambi kokutshintshwa kwayo yi-euro.
I-DMI, inkcazo yenkqubela
Izikhombisi zeMpawu zoLuntu (DMI) ziyinxalenye yeNkqubo yokuLawula iNqununu eyenziwe yashicilelwa ngumsunguli weendlela ezininzi zokurhweba, uJ. Welles Wilder. Ziyicatshulwa kwisigxina kunye ne-Index of Movemental Movement Index (ADX). Izibonakaliso ezimbini zicwangciswe, i-DI efanelekileyo (+ DI) kunye ne-DI Negative (-DI).
Isibane sesibane esenza xa ixabiso livulekile kwaye livale lingalingana. Imele uluhlu olukhulu phakathi kwephakamileyo nephantsi, kodwa ulula kakhulu phakathi kwexabiso elivulekileyo kunye lokuvala kwaye libukeka njengomnqamlezo okanye umnqamlezo ongekho.
Isilinganiso se dola sichazwa njengezinga lokutshintshisiswa kwemali ethile malunga ne-dollar (i-USD). Uninzi lwentengo yokutshintshana lisebenzisa idola njengemali ye siseko kunye nezinye iirhafu njengemali ye-counter.
Oku kuchazwa njengenqanaba lentlawulo echaphazelekayo ekufakeni, okanye imali yokutyalomali kwilizwe elivela kuyo.
Ixesha elisetyenziswe ngabamele abameli beFXCC ukwenzela ukuba kubonise ukuba isenzo somlomo sele senziwe kwaye ngoku siyibophelelo.
Isetyenziswe kuhlalutyo lobugcisa njengendlela yetshathi ebonisa ukuba kukho ukunyuka kwexabiso elizayo
Isetyenziswe kuhlalutyo lobugcisa njengendlela yokwenza ipatheni yefati engabonisa ukunyuka kwexabiso elizayo.
Inkohlakalo ibhekisela kwintetho okanye ithoni yolwimi esetyenzisiweyo xa ibhanki ephakathi ijonge ukukhuthaza uqoqosho kwaye akunakwenzeka ukuba kuthathwe amanyathelo angamaqhinga malunga nokunyuka kwamaxabiso.
Iimpahla ezihlala zihleli
Yisalathisi sezoqoqosho esichaza imiyalelo emitsha ebekwe ngabavelisi basekhaya kwikota elifutshane. Ilinganisa amandla okuvelisa kwaye inceda abatyala-mali ukuba baqaphele indlela yokukhula koqoqosho.
Ukuchazwa nje ngezenzo ezithathwe yibhanki ephakathi, ngenjongo yokuphucula imali, ngenjongo yokukhuthaza umsebenzi wezoqoqosho, ngokukodwa ngokukhuthaza ukunyuka kwamaxabiso emali.
Le ikhalenda esetyenziselwa ukubeka iliso kwiinkalo zezoqoqosho, imetrikhi, idatha kunye neengxelo ngenxa yokukhutshwa yilizwe ngalinye, indawo kunye nokuhlaziywa koqoqosho oluzimeleyo. Ngokuxhomekeke kwimpembelelo abanayo kwiimarike, ukukhutshwa kwedatha kubakho ngokucwangciswa ngokufanelekileyo; abo baxelelwa ukuba banempembelelo enkulu kuninzi ichazwa ngokuthi "impembelelo ephezulu".
I-statistic ngokubanzi ekhutshwe likarhulumente welizwe, ebonisa ukukhula koqoqosho olukhoyo oluchaphazelekayo kwisiqondiso.
Yisiqulatho esichaza amandla enkcitho ekuthelekeni nebhaksi yezinye iirhafu. Ingabonakala kwakhona njengenzame yokwenza isishwankathelo kwimiphumo yoshishino lwelizwe lokutshintshwa kweemali zayo ngezinye iirhafu.
Ukudluliselwa kweFund yeFom.
I-EMA, i-Exponential Moving Average
I-Exponential Moving Average (EMA) ibonisa umyinge wamaxabiso, ukubeka ubunzima beemathematika kumaxabiso angoku kutshanje. Ukulinganiswa okusetyenziswa kwintengo yakutshanje kuxhomekeke kwixesha elikhethiweyo eliphakathi lokunyuka elikhethiweyo ngumsebenzisi. Ifutshane nje ixesha le-EMA, ubunzima obuthatyathwa kwixabiso elithandwayo.
I-Index yoNyaka yeNdleko (ECI)
Isalathisi sezoqoqosho se-US esilinganisa izinga lokukhula kunye nexabiso lokunyuka kwexabiso lomsebenzi.
Ukuphela koMyalelo weSuku (i-EOD)
Oku kuchazwa njengomyalelo wokuthenga, okanye ukuthengisa isixhobo semali kwinqanaba elithile, umyalelo uhlala uvulekile kuze kube sekupheleni kokuthengisa.
Naliphi na iNtengiso
Ukuchazwa nje ngeemeko ezenzeka kwiimarike ze-Euro Interbank deposit, xa zombini i-bid kunye namaxabiso okunikezelwa ngexesha elithile, zichanekile ngokufanayo.
Ukuthengwa kwemali ye-Electronic
Iimali zorhwebo ngokusebenzisa i-akhawunti ye-brokerage akhawunti. Ukuthengwa kwemali ye-elekthroniki kuquka ukuguqulwa kwemali engundoqo kwilizwe langaphandle, kwinqanaba lokutshintshiselana kwamashishini, ngokusebenzisa i-akhawunti ye-brokerage ye-intanethi. Ngokusebenzisa iteknoloji yenkcazelo, izisa abathengi kunye nabathengisi kunye kunye nokusebenzisa i-platform yoshishino yekhompyutha idala indawo ezithengileyo zemarike.
Le ngxowa-mali yokutshintshiselana ye-European Union bloc.
I-European Central Bank (ECB)
Ibhanki ephambili yeYurophu Yomanyano.
IYurophu yeMali yaseYurophu (ECU)
Ibhaskiti yeemali zeelungu le-EU.
I-European Economic Monetary Union (EMU)
Njengenkqubo yokudibanisa phakathi kwamalungu eYurophu yaseYurophu, ibandakanya ukulungelelaniswa kwemigaqo-nkqubo yezoqoqosho kunye neyezimali, kunye nemali efana neyuro.
Ichazwa njengengxowa-mali yokuthengiselana imali ebeka imali kwi-euro, ngokuthe ngqo, okanye ngendlela ye-euro ibiza izixhobo zesikweletu sesikhatshane.
Le yintlawulo yemali ecatshulwe kwiYurophu ngemali ngexesha elithile.
I-Eurocurrency iyimali egcinwe ngaphandle kweemarike zasekhaya ngabarhulumente karhulumente okanye iinkampani. Oku kusebenza kuyo nayiphina imali kunye neebhanki kunaliphi na ilizwe. Njengomzekelo; I-Korea yaseKorea iphumelele kwi-bhanki eMzantsi Afrika, ngoko ibonwa ngokuba yi "eurocurrency". Yaziwa nangokuthi "i-euromoney."
Ii-Eurodollars zichazwa njengexesha lokufaka idiphozi ezilinganiselwe kwiidola zase-US, kwiibhanki ezingaphandle kwe-United States, ngoko azingena phantsi kolawulo lwe-Federal Reserve. Ngenxa yoko ezi ziphofu ziphantsi komgaqo ongaphantsi kwexesha, umzekelo, iifomiti ezifanayo kwi-USA
IYurophu YaseYurophu (i-EU) liqela lamazwe e-28 asebenza njengebhokisi lezoqoqosho kunye nezopolitiko. Amashumi anesithoba anamazwe asetyenziswa ngoku i-euro njengemali yabo esemthethweni. I-Market Single YaseYurophu yasungulwa ngamazwe e-12 kwi-1993, ukuba ihambelane nenkululeko inqununu enye; ukuhamba: impahla, iinkonzo, abantu kunye nemali.
Iimali ezidlulileyo zeMargin
Imali efakwe kwi-FXCC engasetyenziselwa umgama kwiindawo ezivulekileyo ezikhoyo.
Ngokumalunga nokutshintshiselana kwemali, ukutshintshiselwa ngokubanzi kuchazwa njengendawo yokuhlala apho izixhobo zithengiswa kwaye zihlala zilawulwa. Imizekelo: iNew York Stock Exchange, i-Chicago Board yoRhwebo.
Inkqubo eyenziwa nguorhulumente kunye neebhanki eziphambili ngenjongo yokulawula ukungena kunye nokuphuma kwamashishini angaphandle kunye nezixhobo, ukubandakanya: ukugunyazisa iimali ezininzi, ii-quotas, ezithengiselwano, imida, iirhafu kunye neerhafu.
I-Exchange Rate Mechanism - ERM
Indlela yokutshintshiselwa kwemali yintengo yezinga elitshintshileyo lokutshintshiselana kwemali-inkqubo eyenzelwe ukulawula izinga lokutshintshiselana kwemali ngokuphathelele kwezinye iirhafu. Kukho ukuhluka kwezinga lokutshintshiselana kwemali kwimida yemida. Inkqubo yokutshintshiselana kwemali ibedla ngokubizwa ngokuba yinkqubo yemali ye-pegged.
Inkcazo yokutshintshiselana kwamanye amazwe ngemali engaphantsi ethengiswayo kunye neyatshintshaniswa. Iingxowa-mali ezingekho phantsi kwezinto ezingabikhoyo kwaye zingabi nciphisa ubunzulu beemarike, umzekelo, i-euro kwaye ngoko ke ithengiswa kwimilinganiselo engaphantsi. Ukurhweba imali engaphandle yinto enokuthi ixabise kakhulu njengoko iicatshulwa-i-bid / ask ask spread, ihlala iqhubeka. I-Exotics ayithengiswanga kalula (okanye ikhona) kwi-akhawunti ejwayelekile yomrhwebi. Imizekelo yeemali zeengqobhoko ziquka i-baht yaseThai kunye neDarar dinar.
Ibhekisela kumngcipheko ophathelene nokuhluthwa kwintengo yemarike engakhokelela kwinzuzo okanye ukulahleka.
Ingxelo eyenziwe yi-Bureau yoBalo lwabasebenzi base-United States inikezela iinkcukacha zemibare yezinto ezingenasigxina kunye nezizinzileyo zokuthunyelwa, imiyalelo engazalwanga, kunye neencwadi zokuvelisa abenzi basekhaya.
Ukuhamba ngokukhawuleza kwamanani, okanye amaxabiso kwiimarike ezibangelwa ukungalingani kweemeko kunye nokufunwa kweemeko ezivela kubathengi kunye / okanye abathengisi, bayaziwa kwakhona imeko xa iimarike zezemali zifumana amanqanaba aphezulu ngokungahambelani, zidibaniswe nezoshishino ezingaqhelekanga. Kwiimeko ezinjalo amaxabiso, okanye amaxabiso, ayinakufumaneka ngokukhawuleza kubaxumi kude kube yinto eqhubekayo yokuthengisa imarike.
Imali yeFund Fund
Inzala yenzalo apho idiphozithi yokubambisa imali iboleka imali egcinwe kwi-Federal Reserve ukuya kwelinye inhlangano yokubambisa i-depository ubusuku bonke. Isetyenziselwa ukuqhuba umgaqo-mali wemali kwaye ithinte utshintsho kwimali yokubonelela eyenza utshintsho kwinqanaba lomsebenzi kwizoqoqosho eMelika.
Izilinganiso zemali ezigcinwe ziibhanki eziphantsi kolawulo lweBhanki ye-Federal Reserve yasekhaya.
Esi sifingqo se-United States Federal Reserve Reserve.
IKomidi leMarhwebo eVulwayo
Kwaziwa nangokuthi yiFOMC. Lo ngumzimba wabantu abagqiba isigqibo somgaqo-nkqubo wezemali oza kuqhutywa eMelika. I-FOMC ijongene ngokuthe ngqo kwi-rate yemali ye-Federal kunye nezinga lokunciphisa. Ezi zombini iirhafu zinempembelelo ekulawuleni amanqanaba okukhula kwemali kunye namanqanaba omsebenzi wezoqoqosho eMelika.
KwiBhodi yeBhodi yokuGcina
Ibhodi ye-Federal Reserve System, ekhethwe nguMongameli wase-US ngekota ye-14, enye yebhodi iqeshwe iminyaka emine njengosihlalo.
System Reserve System
Inkqubo yebhanki enkulu yase-USA, equka ii-12 Federal Reserve Banks, ukulawula izithili ze-12 phantsi kokulawulwa ngqo kweBhodi yeBhodi yokuGcina. Ubulungu be-Fed buyinyanzeliso yebhanki ezichongiwe nguMlawuli woMgaqo-mali kunye nokuzikhethela kwiibhanki ezichanekileyo zikarhulumente.
Leli gama elisetyenziselwa uhlalutyo lobugcisa olubhekiselele kumanqanaba nenkxaso kunye nokumelana nokulungiswa kunokuhlaselwa ngaphambi kokubuyela kwisikhokelo sokunyuka kwexabiso.
Gcwalisa, okanye uzalise
Le yintsebenzo eyenziwa egameni / kwiakhawunti yomthengi ngenxa yesondlo somthengi. Xa uzalisiwe, umyalelo awukwazi ukukhanselwa, ukulungiswa okanye ukukhishwa ngumxhasi.
Yilona xabiso apho umyalelo wabaxumi ukuba bahambe ixesha elide okanye elifutshane liphunyezwa.
I quotation e qi
Oku kuchazwa njengengqikithi yentengo, ihanjiswe kwisabela kwisicelo sezinga eliqinileyo, eliqinisekisa ubungqina okanye ukucela intengo ukuya kwisixa esicatshulweyo. Ixabiso apho iqela lokucaphuna likulungele ukuqhuba ikhonkco, ukulungiswa kwendawo.
Ukusetyenziswa kweerhafu kunye / okanye ukuvuselelwa njengesixhobo, ukuphunyezwa komgaqo-mali.
Le yimihla yekhalenda yenyanga nganye efana nale ndawo. Kukho ezimbini ngaphandle. Ukufumana inkcazo eyongezelelweyo ibone ulwazi malunga nemihla yamanani.
Le yimivuzo esemthethweni ebekwe ngabaphathi bezemali. Yinani lemali elibekwe kwelinye imali okanye zemali.
Kucaciswa njengendlela yokumisela amaxabiso ngokusekwa kwezinga elilinganisela abathenge abathengisi. Le nqubo iyenzeka kanye, okanye kabini imihla ngemihla echaziweyo. Isetyenziswe ngamanye amazwe, ngokukodwa ekumiseni amaxabiso okukhenketho.
Inkqubo yeeNkcukacha zeMali (FIX) i-protocol yasungulwa kwi-1992 kwaye iyimilinganiselo yokuthumela umashishini ekutshintshiselwano kolwazi olunxulumene nokuthengiswa kwamasheya kunye neemarike.
Ichazwa njengentengo yokutshintshiselana apho intengo yemali isetyenziswe yimakethi yemakethe eyakhiwe ekunikezeni kunye nemfuno efana nezinye iirhafu. Iimali zemali ezikhulayo zixhomekeke kungenelelo lwabaphathi bamali. Xa lo msebenzi udla rhoqo, i-float iyaziwa njengento epholileyo.
IKomidi yeSouthern Market Market, ikomiti ngaphakathi kweState Reserve System eyenziwe ngamalungu e-12 abeka umgaqo-nkqubo wezemali. Izaziso zikwazisa uluntu malunga nezigqibo ezenziwe kwizinga lentengo.
Utshintsho lwemali yelinye ilizwe
Igama elithi "utshintshiselwano lwangaphandle" libhekiselele ekuthengisweni kwemali ekuthengiseleni kwemali yangaphandle, akukho mnye, ophakathi, ogunyazisiweyo kunye nolwazi oluchanekileyo lokurhweba phambili. Eli gama linokuthi libhekiselele kumashishini ekurhweba kwiintengiso ezifana ne-IMM kwi-Chicago Mercantile Exchange.
Ukutshintshiselwa kwamanye amazwe
Ukuthengiswa okubandakanya ukuthengwa kunye nokuthengiswa kwemali emibini ngexesha elithile kwisantya esivumelweneyo ngexesha lokupheliswa kwekhontrakthi, eyaziwa nangokuthi 'umlenze omfutshane', ngomhla ozayo kwixesha elivunyelwene ngalo ixesha lesivumelwano - 'umlenze omde'.
"I-Forex" yigama elifutshane elifunyenweyo lokutshintshiselana kwamanye amazwe kwaye ngokubhekiselele kubhekiselele ekuthengisweni kwemali ekuthengisweni kwemali yangaphandle.
Isicwangciso sokurhweba esetyenziswe ngabathengisi bokuqala abazama ukuxhaphaza umahluko kwimilinganiselo yeebhanki zemali. Kuthatha inzuzo yokusabalala okwehlukeneyo okunikezwa ngumthengisi weqela elithile. Isicwangciso siquka ukuphendula ngokukhawuleza kumathuba.
Iiyure zeehorityhulam zangaphambili
Ichazwe njengeeyure apho abathathi-nxaxheba be-market forex bangakwazi: ukuthenga, ukuthengisa, ukutshintshisana nokucingisisa ngeemali. I-market forex evulekile iiyure ze-24 ngosuku, iintsuku ezintlanu ngeveki. Iimarike zemali zidibanisa: amabhanki, iinkampani zorhwebo, amabhanki aphakathi, iifom zokulawula utyalo-mali, i-hedge funds, i-frontx brokers kunye nabatyalo-mali. Imarike yemali yamazwe ngamazwe ayinanto yokutshintshiselana phakathi, ibandakanya inethiwekhi yehlabathi jikelele yeengxoxo kunye nabathengisi. Iiyure zokurhweba kwi-Forex zisekelwe xa ukuhweba kuvulekileyo kwilizwe ngalinye elichaphazelekayo. Xa iimarike ezinkulu zihamba; I-Asia, iYurophu nakwi-USA, inani eliphezulu lezohwebo lwenzeka.
Oku kubhekisela kwisetyenzisi seendlela, eziqhelekileyo ezisetyenziselwa ngabahwebi bemini ukwenzela ukuba zichaze ngokukhawuleza ukuba iimali zentengiso zingatshintsha ukusuka kwi-bullish ukuya kwi-bearish kunye nakwezinye izinto. Ngamanye amagama, isetyenziselwa ukuchonga amanqanaba nenkxaso kunye namanqanaba. Amaphuzu e-Forex pivot abalwa njengomyinge we: ophezulu, ophantsi kunye osondeleyo (HLC), ukusuka kwiseseshoni yangaphambili yokuthengisa.
I-Forex Spread Betting
Ukusabalalisa ukubheja okubandakanya iibhentshi ekuhambeni kwentengo yeebhanki zemali, ibhidi kunye nexabiso lokubuza.
Ukusasaza iifenethi zokubheja ezinika imali yokusabalalisa ukubethelwa kwamanani amaxabiso amabini, ibhidi kunye nexabiso lokubuza - ukusasazeka. Abahwebi batheba ukuba ixabiso lentlawulo yebhanki iya kuba ngaphantsi kwexabiso lentengiso, okanye liphezulu kunexabiso lokubuza.
Inkqubo yekhompyutheni yokurhweba kwesoftware esekelwe kwiimpawu zorhweba lobugcisa, ezikunceda ukugqiba ukuba ungangena kwi-intanethi yebhanki ethile yemali kwixesha elithile. Iidrobhethi ze-forex, kubahwebi abathengisa ngokukhethekileyo, zihlala zikunceda ekususeni inxalenye yengqondo yokuthengisa.
YoTshintsho lweNkqubo yeeNkqubo
Oku kuya kuchazwa njengorhweba ngokusekelwe kuhlalutyo ukukhetha ukuba uthenge okanye uthengise ididi yemali ngexesha elithile, ngokuphindaphindiweyo kusekelwe kwisethi yempawu eziveliswa zixhobo zohlalutyo lobugcisa, okanye imicimbi yeendaba eziphambili kunye nedatha. Inkqubo yokurhweba yomrhwebi ngokubanzi ibunjwe ngamasignali ovelisa ukuthenga okanye ukuthengisa izigqibo, ezenza ukuba kubekho kwezoqoqosho ezixhamlayo.
Ngamanye amaxesha isetyenziswe njengenye indlela ebonisa ukuba 'phambili' okanye 'ikamva'. Ngokukodwa ukulungiselela amalungiselelo afanayo njengento ehamba phambili phakathi kwebhanki kunye nomthengi.
Amanani okupasa acatshulwe ngokubhekiselele kumaphuzu aphambili, amele ukumahluko phakathi kwezinga eliphambili kunye namabala. Ukufumana isantya esingaphambili, ngokuchasene nomyinge wokutshintshisana, amaphuzu ahamba phambili angeniswa, okanye asuswe kwizinga lokutshintshiselwa. Isigqibo sokususa okanye ukongeza amaphuzu sichazwe ngokwahlukileyo phakathi kweentlawulo zedizithi zezo zombini zezimali ezibandakanyekayo kumsebenzi. Imali eyisezantsi kunye nenqanaba eliphezulu lemali liyancishiswa kumyinge wexabiso elingaphantsi kweemarike eziphambili. Iingongoma eziphambili zikhutshwa ukusuka kwinqanaba lebala. Ixabiso lemali elingaphantsi kwexabiso lemali liphantsi kweprayimamu, amaphuzu angaphambili afakwe kwizinga le-spot, ukuze athole izinga eliphambili.
Le yimiba yezoqoqosho ezinzulu kumgangatho wesithili okanye wesizwe, ezamkelekileyo njengokwenza isiseko sexabiso elihambelana nemali, ezi ziza kubandakanya izinto ezifana nokunyuka kwamaxabiso, ukukhula, ukulingana kwezorhwebo, ukulahleka kukaRhulumente, kunye nenzala. Ezi zinto zichaphazela abantu abaninzi kunabantu abambalwa abakhethiweyo.
Indlela esetyenziselwa ukulinganisa ixabiso eliyintloko lemali ethile esekelwe kwiindaba eziphambili kwiinkcukacha zoqoqosho, imigaqo-karhulumente, kunye nayiphi na imicimbi echaphazelayo kwilizwe lelizwe.
Esi sichazamagama sokutshintshiselana kwamanye amazwe, esetyenziswa ngokubanzi namhlanje.
I-FXCC yi-brand yomhlaba wonke ogunyazisiweyo kwaye ulawulwa kumagunya ahlukeneyo, aquka amabini amabini: I-FX Central Clearing Ltd kunye neCentral Clearing Ltd.
I-FXCC inikeza inkqubo yenkqubo yokuthengisa i-demo, into epheleleyo ye-replica ye-FXCC yoshishino lokuthengisa. I-platform yezobugcisa bemoyi ivumela abaxhasi be-FXCC ukuba baqhelane nokusebenza kwendlela yokuthengisa kunye nezinto eziphathekayo, ngaphandle kokubeka nayiphi na inkunzi ngokuqhuba izivumelwano ezithengiweyo. Iqonga alibandakanyi iikontraki zangempela okanye iikhontrakthi, ngoko nayiphi na inzuzo, okanye ilahleko eyenziwe ngokusebenzisa ipulatifti. Ingqongqo kuphela ngenjongo yokubonisa kuphela.
I-FXCC Ingxelo yokuLawulwa kweengozi
Ukuchazwa kweengozi zeFXCC kuchaza ingozi echaphazelekayo xa kusebenza kwi-CFD kunye nokuncedisa umxhasi ekuthathweni kwezigqibo zotyalo-mali ngokucacileyo.
Ukuchazwa njengamazwe asixhenxe ahamba phambili kumazwe ashishino: i-USA, eJamani, eJapan, eFransi, e-UK, eCanada nase-Itali.
Le yiG7 kunye: iBelgium, iNetherlands neSweden, iqela elidibene neengxoxo ze-IMF. I-Switzerland ngamanye amaxesha (ngokukhawuleza) inxaxheba.
Mfutshane kwiPound Great Britain.
Kuhamba ixesha elide
Kucaciswe njengento yokuthenga ididi yemali. Umzekelo; ukuba umthengi uthenge i-EUR / USD, 'baya kuhamba' iYurophu.
Le yenzo yokuthengisa ididi yemali. Umzekelo; ukuba umthengi uthengise i-EUR / USD, 'baya kufutshane' neYurophu.
Oku kuchazwa njengenkqubo ejongene nemali, phantsi kwayo urhulumente kunye ne-bhanki ephakathi, ulungisa i-currency yabo engakwazi ukuguqulwa ngokugqithiseleyo ibe yigolide ngenxa yeempawu zayo eziphambili. Inokusetyenziswa kwemali engekho, ngoko kulindeleke ukuba igcine ubuncinane bezinga lemfuneko yonyani. Kwakhona kubhekisela kwiinkqubo zemali ezikhuphisana ngokukhululeka, apho igolide, okanye iirisithi zee-golide, zisebenza njengenqununu yokutshintshiselwa.
Kulungile 'Kukhishwe (I-GTC umyalelo)
Umyalelo wokuthenga okanye ukuthengisa ngentengo ehleliweyo eqhubekayo isebenza kuze kube yilapho ichithwa okanye ikhanselwe ngumthengisi.
Leli gama elisetyenziswe kwigigon emele i-dollar paper dollars.
Imveliso Yomhlaba Yonyango (GDP)
Ichazwe njengexabiso elipheleleyo lempahla kunye neenkonzo eziveliswe kweli lizwe kwixesha elithile.
UMveliso weSizwe oPhezulu (GNP)
Ingumlinganiselo wezoqoqosho ulingana ne-GDP kunye neholo engenayo evela kwiphumo, ingeniso, okanye iimali ezithengwa ngaphandle.
QAPHELA: Okulungileyo kukhishwe.
Isibane sesibane esichazwe ngesikwere esifana nomzimba onomthi omude ukuya ngasezantsi.
Isibambiso sichazwa njengenombolo yonke inxalenye yentengo yexabiso, ukuphelisa ii-decimals. Kwiimarike zerhwebo lwangaphandle, umphathi uphinde ubhekisele kwingxenye yexabiso elicatshulwayo elivela kwixabiso lentengiso kunye nexabiso lemali. Umzekelo; ukuba i-EUR / USD currency pair ine-bid ye-1.0737 kwaye icele i-1.0740, umphathi uya kuba yi-1.07; inqaku elilinganayo kwiibhidi kunye nexabiso lokubuza. Ngokuqhelekileyo ekubhekiswa kuthiwa "ngumntu omkhulu" isingatha sisoloko sisetyenziswe njengengqamana ukuchaza inqanaba elivelele elikuyo, umzekelo, i-DJIA iya ku-20,000.
Imali enzima iyaziwa ngokuba yimali echanekileyo kwaye iyona ifomu elixabisekileyo kakhulu lemali ekuthengiseni ngamazwe ngamazwe. Ziyi-currencies zivunywe ngokubanzi kwihlabathi njengeendlela zokuhlawula iimpahla kunye neenkonzo. Iimali ezinzima ngokubanzi zihlala zizinzile ngamaxesha ambalwa kwaye zixakeke kakhulu kwiimakethe zangaphambili. Iimali ezinzima ziveliswa kwiintlanga ezineemeko ezinoqoqosho kunye nezopolitiko.
Imvakalelo yebhanki enkulu xa ihlose ukwandisa inzala, enokubuyela kwisiphumo esihle kwimali.
INtloko kunye namaGawulayo
Iprojekthi yetshathi esetyenziselwa uhlalutyo lobugcisa olucebisa ukuguqulwa kwendlela ethile, umzekelo, ukusuka kwintsebenziswano ukuya ku-trend trend.
Iquka ukugcinwa kwezikhundla ezide kunye ezimfutshane zexabiso elifanayo.
UkuThengiswa koPhezulu oluPhezulu (HFT)
Olu luhlobo lweentengiso ze-algorithm kunye ne-volume enkulu ye-oda, eyenziwa ngokukhawuleza ngokukhawuleza.
Eziphezulu / eziphantsi
Intengo ephezulu kakhulu yokuthengisa okanye intengo ephantsi kakhulu yokuthengiswa kweso sixhobo sosuku lworhwebo lwangoku.
Leli gama elisetyenziswe ukuchaza isenzo somthengisi webhanki yemali, xa uthengisa kwicala lokubhengeza imarike.
Le nto iguqulelo lwemali ye-Hong Kong idola (HKD), imali yaseHong Kong. Yakhiwe ngamasenti e-100, ngokuqhelekileyo amelwe nguphawu lwe $, okanye i-HK $. Inqaku leTshayina elikhupha iibhanki linamandla okukhupha i-Hong Kong idola, phantsi komgaqo-nkqubo kaRhulumente waseHong Kong. I-HK $ idlulela kwi-exchange exchange fund ephethe i-dollar yaseU.S.
Ngokumalunga nokuthengiswa kwemali, oku kuchazwa nje ngokuba ngumthengi webhanki yemali.
Iimpawu zeMakethe yeZindlu
Izalathisi zezoqoqosho ezihambelana nezindlu, ikakhulukazi e-USA nase-UK, ngokusekelwe kwidatha yezindlu epapashwe.
Le yunani leeprojekthi zonyango zokuhlala (izindlu ezizimeleyo) ezithe zaqala ngexesha lokunikezelwa kwexesha, ngokuqhelekileyo kucatshulwe ngenyanga okanye ngonyaka.
Ichimoku yenzelwe ngaphambi kweMfazwe Yehlabathi II, njengemodeli yokubikezela iimarike zezemali, umqondiso olandelayo emva kokubonisa iipaliti eziphakathi kweendawo eziphakamileyo kunye neengcambu zexesha. Injongo yesalathisi kukuvelisa iimpawu zokurhweba ezifana neyadalwa ngokufuduka kwemimandla, okanye ngokuhlanganiswa kwe-MACD. Imigca yetshathi ye-Ichimoku idluliselwa phambili ngexesha, idale inkxaso nenkxaso ebanzi, mhlawumbi oku kunciphisa umngcipheko wokuphulwa kwamanga.
I-International Monetary Fund esungulwe kwi-1946 ukwenzela ukubonelela ngemali-mboleko yamazwe ngamazwe ambalwa naphakathi.
Ingumlinganiselo obangelwa umahluko phakathi kwezinga lebala kunye nereyitha elizayo kwintengiso.
Imali eyayiyo ngenxa yemimiselo yokutshintshiselana kwamanye amazwe okanye izithintelo zomzimba ayikwazi ukutshintshana ngolunye uhlobo lwemali. Iimali ezingenakuthenjwa ziyakunyanzelwa ekuthengiseni, ngenxa yokunyanzeliswa okuphezulu, okanye izigwebo zezopolitiko.
Isicatshulwa esingangqaliyo xa i-USD iyimali eyisiqingatha sebini kwaye ayikho imali yokucaphula. Ekubeni i-USD iyona mali ephezulu kwiimarike zerhwebo zangaphandle, ngokuqhelekileyo isetyenziselwa njengemali yesiseko kunye nezinye iirhafu, umzekelo waseJapan okanye i-dollar yaseCanada isetyenzisiwe njengemali ye-counter.
I-Industrial Production Index (IPI)
Isalathisi sezoqoqosho esilinganisela imisebenzi yemarike. Ipapashwa yiBhodi yeSigqeba yeSigqeba sase-USA rhoqo ngenyanga kwaye ilinganisa umkhiqizo wokuveliswa kwemigodi, ukuvelisa kunye nezinto ezincedisayo.
Ukuchazwa nje ngokunyuka kwamaxabiso eempahla zabathengi, ngokuthe ngqo ngokumalunga nokunciphisa amandla okuthenga.
Iimfuneko zokuQala iMargin
Oku kuchazwa njengelona-mali elincinci lomlinganiselo ofunekayo, ukuze kusekwe indawo entsha evulekileyo, apho iMargin yokuqala kufuneka ibe ngaphantsi okanye ilingane nomda okhoyo. Imfuno yokuqala yemida ingabonakaliswa njengepesenti (umzekelo: 1% yemali ye-dollar yase-US), okanye ingabalwa ngengoxabiso yokulinganisela.
Iimarike ze-interbank zichazwe njengengaphezulu kweemarike ze-counter marketers, kwi-FX yorhwebo baza kwenza ukuba iimarike zokudala zitshintshwe ngaphandle.
Amanani okutshintshwa kwamanye amazwe acatshulwe phakathi kweebhanki zomhlaba.
Le yenkampani yokurhweba esebenzayo kwiimarike (okanye i-OTC derivatives), esebenza njengabalamli phakathi kwabathengisi abakhulu kunye nabathengisi bentsebenziswano phakathi. Umzekelo; amalungu eLondon Stock Exchange, avunyelwe ukujongana nabenzi bemarike, ngokuchasene noluntu jikelele.
Imali ehlawulwe ukusebenzisa imali. Amanqanaba omdla athatyathwa ngamanani asetyenziswa yiFed.
Ngenxa yolu bakala, ulwahlulo lwezinga lomdla kunye nokwahlula phakathi kwezinga lokutshintshela phambili kunye neendawo zendawo phakathi kwamabini amabini alinganayo. Ubungakanani bentlalo echaphazelekayo idibanisa: amazinga omyinge, amazinga okutshintshwa kwamanani kunye namazinga okutshintshwa kwamanye amazwe
Yinyathelo eliphambili elichaphazela ixabiso lemali yalo, ngokuthengisa okanye ukuthenga iimali zangaphandle ngokutshintshiselana nekhaya labo, njengenzame yokutshintsha izinga lokutshintshiselwa.
Ukuchonga njengezikhundla eziqhutywa ngumxhasi weFXCC ngosuku. Ngokuqhelekileyo libheke ngekota.
Ebhekiselwe njengomntu, okanye iqumrhu elisemthethweni elithumela abathengi kwi-FXCC, ngokuphindaphindiweyo ngokubuyisela imbuyekezo ngokumalunga nemirhumo nganye. Abavelisi banqatshelwe ukuba bamkele imali echithwe ngabathengi babo.
Kucaciswa njengento apho iqoqo lezemali ligcina ubudlelwane obusondeleyo komnye nomnye, apho iirhafu zabo zihamba ngokuhambelanayo nomnye umgaqo-mqathango kwiimeko zokubonelela kunye nezidingo kwiimarike zentengiso. Iibhanki eziphambili ezichaphazelekayo kwesi sivumelwano zigcina ukudibanisa ngokubambisana ngokuthenga nokuthengisa iimali zemali.
Le yimali yokubhalwa kwemali yeJapan yaseYapan (JPY), imali yaseJapan. I-yen iquka i-100 sen, okanye i-1000. I-Yen ijwayele ukumelelwa (njengesimboli) ngencwadi enkulu Y, kunye nemigca emibini engqamleyo kwiziko.
Kucaciswa njengemali esetyenziswe njengento yokubhengeza kwiintengiselwano ngamazwe kunye nokubeka amanani okutshintshiselana. Iibhanki eziMbindi zigcina iimali eziphambili ekugcinwe kuyo kwaye i-dollar yaseMelika ibonakala njengemali ebalulekileyo kakhulu yelizwe.
Isiteshi seKelltner (KC)
Isiteshi seKelltner saqulunqwa kwaye senziwa kwi-1960 nguChester W. Keltner kwaye sichazwe kwincwadi ethi "Indlela yokwenza imali kwimpahla". I-Keltner Iziteshi ziqulunqa imigca emithathu, equlethwe yile: ephakathi kokuhamba okulula, kunye namaqela aphezulu kunye aphantsi ahlelwe ngaphaya nangaphantsi kwesi silinganiso esihambayo. Ubanzi beemigangatho (ukudala ishaneli), kusekelwe kwisimo esilungisiweyo somsebenzisi esisetyenzisiweyo kuMyinge oyiNqanaba leNyaniso. Esi siphumo songezwa kwaye sishiywe ukusuka kumgca ophakathi.
Slang kwiDola yaseNew Zealand.
Yazi Umthengi Wakho, yinkqubo yokuthobela ilandelwa iifenki zokurhweba ezifana neFXCC.
Izikhombisi eziphambili kunye nezikhokelo
Phantse bonke (ukuba kungengabo bonke) izikhombisi zezobugcisa, zikhokeli; ababaniki ubungqina bokuthi, umzekelo, ididi yeemali iya kuziphatha ngendlela ethile. Olunye uhlalutyo olusisiseko lunokukhokelela, kuba lunokuba luphawu oluphambili lweziganeko. Uphando lwabathengi abathengi kwixesha elizayo lingabonisa impilo yegqeba lokuthengisa. Uphando lwebhunga lokwakha izindlu lunokunika ubungqina bamalungu abo azinikele ekwakheni amakhaya angaphezulu. Ucwaningo lwe-CBOT lubonisa ukuba abahwebi abazinikeleyo bathengise ukuthenga nokuthengisa ezinye izixhobo zemali.
Ukuthengiswa kwemali ecatshulwayo, kwaziwa nangokuthi ithathe intengiso yexabiso lokubhengeza.
Ixabiso leemali zelizwe, eziye zaqatshelwa ngumthetho njengeendlela ezisemthethweni zokuhlawula. Inkcitho yesizwe ithathwa njengelithenda eligunyazisiweyo kumazwe amaninzi, kwaye isetyenziselwa ukuhlawula uxanduva lwabucala okanye loluntu, kunye nokuhlangabezana nezibophelelo zemali. Umboleki-mboleko unyanzelekile ukuba amkele ithenda yezomthetho ekubuyiselweni kwetyala. Ithenda yomthetho ikhishwe ngumzimba wesizwe ogunyazisiweyo, njengowomnini-mali we-US e-United States kunye neBhanki yaseNgilani e-UK.
Oku kukulawulwa kwesimo esikhulu semveli, ngokusetyenziswa kwexabiso elincinci.
Uxanduva lubopheleleko lokuhambisa imali yemali ngexesha elithile kwixesha elizayo ukuya kumlingani.
I-Inter-Bank ye-London Inter-Rate.
Umyalelo wesigxina ungasetyenziselwa ukubeka urhwebo ukungena kwimarike kwintengo echazwe ngaphambili. Xa intengo yemarike ifinyelela kwixabiso eliphambili, umyalelo ungabangela (umyalelo wesigxina awuqinisekisi ukuba umyalelo uya kuqhutywa) kwinqanaba elinqunyiwe. Kungenzeka, ngenxa yokungazinzi kwimarike ukuba imarike ifinyelele kumlinganiselo wexabiso kwaye ngokukhawuleza ibuyele kwinqanaba lentengo, kunye ne-volume encane yokuthengisa. Emva koko, umyalelo wesilinganiselo awunakukhutshwa kwaye uya kuhlala usebenza ukususela ngexesha eliya kuqhutywa okanye ide umxhasi aphephe umyalelo.
Le yintengo umthengi ecacileyo xa ebeka umyalelo wemiqathango.
Isalathisi elula idibanisa amaxabiso athile ngexesha elikhethiweyo.
Le yimeko kwimarike apho kukho inani elaneleyo lokuthengisa, ukuze kuthengwe ngokulula, okanye kuthengise izixhobo ngokubanzi kwi (okanye kufuphi) namaxabiso acatshulwayo.
Ichazwe njengento yokuthengiselana eyenza ukuba ikhutshwe, okanye ivala isikhundla esasimiselwe ngaphambili.
Xa i-akhawunti yomthengi ingenayo imali eyaneleyo yokubamba izikhundla ezivulwe, ukuhlaliswa kuya kuvela ngokusekelwe kwinqanaba le-akhawunti elithile eliza kuvula izikhundla ezivulekileyo kwixabiso elifumanekayo ngexesha elinikeziweyo. Umxhasi unokuthintela ukuchithwa kwe-akhawunti kunye nezikhundla ngokufaka i-margin eyongezelelweyo kwi-akhawunti, okanye ngokuvala izikhundla ezivulekileyo ezikhoyo.
Eli yigama elisetyenziselwa ukuchaza inani lemali ekhoyo ukuthenga, okanye ukuthengisa ngexesha.
Ngenxa yenkomfa yenkomfa yeLondon yaseDondon ye-Gold (Scotia-Mocatta, Deutsche Bank, iBarlaylay Capital, i-Societe Generale kunye ne-HSBC), intengo nganye nganye yezitye ezixabisekileyo, ezifana negolide, isilivere, iplatinum ne-palladium isetyenziswe imihla ngemihla kwi-10: I-30 (iLondon ikulungiselele) kunye ne-15: 00 GMT (ukulungiswa kwe-London pm). Intengo yokulungisa indawo yeLondon ithathwa njengeyigqityiwe xa idilesi yenkomfa iphela.
Xa umthengi evula indawo entsha yokuthenga ibini yebhanki, kucingwa ukuba uhambe 'eside'.
Umthengisi kunye ne-slang elide kwi-pair USD / i-CAD currency currency.
Ichazwe njengeyunithi esetyenzisiweyo ukulinganisa ixabiso lentengiso. Ukuthengiselana kubhekiselwa kuye kwinani leentengiso ezithengiswayo, kunokuba zixabiswe ngemali yazo. Ixesha eliqhelekileyo lokurhweba elibhekiselele kumyalelo kwi-unit ye-100,000.
I-MACD, Ukuhambisa Umyinge we-Convergence kunye noDivegence
Yisalathisi esibonisa uxhulumaniso phakathi kwamanqanaba amabini ahambayo kunye nendlela asebenzisana ngayo xa ixabiso liguquka. Yindlela elandelayo yokubonisa isibonakaliso.
Lo ngumda ophantsi kakhulu ofunekayo, umthengi kufuneka abe nayo kwi-FXCC, ukuze ahlale evulekile, okanye agcine indawo evulekile.
izibini zomdlalo ezinkulu
Iimbini eziphambili zibhekiselele kwiibhanki zemali ezithengiswa kakhulu kwimarike yangaphambili, njenge-EUR / USD, i-USD / JPY, i-GBP / USD, i-USD / i-CHF. Ezi zibini ezinkulu zeemali ziqhuba i-market forex market, ii-USD / CAD kunye ne-AUD / USD zidibanisa nazo zingabonwa njengama-majors, nangona ezi zibini zibizwa ngokuba "zimbini zeempahla".
Yimveliso epheleleyo yecandelo lokuveliswa kweeNombolo zoPhuhliso lweShishini.
Leli gama elisetyenzisiweyo xa umphathi wezemali uza kuba ngumrhumo werhafu kwiakhawunti yabathengi ngendlela efanayo yokuqesha umcebisi-mali, ukwenzela ukulawula i-akhawunti yomtsalo-mali, umzekelo, ukulingana.
I-Call ye-Marginal iyenzeka xa izinga labaxhasi bexhasi lihla kwi-100% njengoko kusekwe yiFXCC. Umxhasi unako ukhetho lokufaka imali engaphezulu ukuze uhlangabezane neemfuno ze-margin kwaye ugweme ukuMisa ngaphandle okanye uvale ubuncwane abancinci.
Oku kuchazwa njengesixa-mali semali yabathengi esithembisene nezikhundla ezivulekileyo ezidibeneyo.
Umda kunye nokuphakanyiswa kudibeneyo. Ngokunjalo, i-lower down the average, ephakamileyo umda
Kufuneka ukuba kugcinwe indawo evulekileyo kunye nangoko. Ukuvakalisa iMathematika; umda = indawo evulekileyo / ubungakanani obuphezulu bokulinganisela ukuhweba. Umzekelo; Isikhundla se-USD / CHF i-100,000 ye-USD kwisilinganiselo esiphezulu somlinganiselo wokuhweba we-100: 1, iya kufuna umgama osemthethweni olingana no-100,000 / 100 okanye i-$ 1,000. Ukubala iimarike zeebhanki zemali, apho i-USD engekho isiseko (semali ye-EUR / USD, i-GBP / i-USD) kunye neminqamlezo (EUR / JPY, GBP / JPY), kunye nexabiso lemali-mali liyakutshintsho libe ngu-USD, ngokusebenzisa isilinganiso semali yokutshintshiselana. Umzekelo; ukuba umthengi uthenge i-1 ezininzi ze-EUR / USD, xa ixabiso le-1.0600. Ngoko ke, i-100,000 EUR ilingana ne-100,600 USD. I-100,600 / 100 yokulinganisela isilinganiso = $ 1,006.00
Eli thuba lisetyenziselwa ixesha elithile lexesha xa imarike ivala, nto leyo i-5 PM EST ngoLwesihlanu ukufumana i-forex brokers indawo.
Ibonisa i-oda yokuthenga / yokuthengisa kwiimarike zesitye esithile.
Ngokuqhelekileyo kusetyenziswa ii-STP kunye ne-ECN brokerages, le yindlela yokusebenza xa umthengisi engaqinisekanga ukuba athathe intengo egcinwe kwisikrini sesigxina, kodwa iqinisekisiwe ukufumana urhwebo. Akukho zicatshulwa kwakhona ngale ndlela yokusebenza.
Umenzi weemarike uchazwa njengomntu, okanye ugunyazisiweyo ogunyazisiweyo ukudala nokugcina iimarike kwisixhobo.
Umyalelo wemarike uthathwa njengomyalelo wokuthenga, okanye uthengise ibini elikhethiweyo lwemali, kwixabiso lentengiso ekhoyo. Iimali zeemakethe zenziwa ngexabiso eliboniswe ngethuba umsebenzisi echofoza iqhosha elithi 'BUY / SELL'.
Ingqungquthela yebhanki ekhoyo yohlu linye lwemali enye enye ingatshintshana enye ngexesha langempela.
Ibhekisela kumngcipheko onokuvela kwimikhosi yemakethi, umzekelo, ukubonelela kunye nokufuna, okubangela ukuba ixabiso lentengo-mali itshintshe.
Leli gama elisetyenziswe ukubonisa ubuhlobo bentsebenziswano yamanani, ngokumalunga nokulingana kwamahhala.
Ichazwe njengomhla wokuhlawulela ukuthengiselana obekwe ngaphambili ngexesha lokungena kwisivumelwano.
Ukulinganiswa koMlinganiselo wokuThengiswa koRhwebo
Ubungakanani bubonakaliswa njengomlinganiselo, okhoyo ukuvula isikhundla esitsha. Ivumela abahwebi ukuba bangene kwiimakethi kunye nezolimo eziphezulu kakhulu kunokuba idiphozithi yokuqala ivumeleke. Umzekelo; Ixabiso le-100: I-1 ivumela umthengi ukuba akwazi ukulawula isikhundla se-100,000 se-$, kunye ne-1,000 ye-margin ($ 100,000 / 100 = $ 1,000).
Yona incinci yeyunithi yesunithi yesigqeba ekuthengiseni i-Forex elingana neeyunithi ze-1,000 zemali yesiseko.
Iinqwelo ezincinci zenza ukuba abathengisi bezabelo bathengise amancinci amancinci kwaye ke banciphise ingozi enkulu.
Kwi-akhawunti encinci, abathengi banako ukuthengisa amaqashiso amancinane, ngoko ke lo hlobo lwengxelo luvame ukuthandwa phakathi kwabathengisi be-novice apho banokuthengisa khona amanani amancinci.
Olu hlobo lweakhawunti lubangela ukuba abarhwebi bangene kwiimakethi kunye neendawo ze-1 / 10 ubungakanani bexabiso eliqhelekileyo.
Iqashiso elincinane linokulingana kwemali yokuthengisa ye-0.10, apho ixabiso lenye ipayipi xa isekelwe kwi-USD lilingana ne-$ 1.
Iimbini zeebhanki zeMinor, okanye "abancinci" ziquka ezinye iindidi zemali kunye nemali yee currencies. Ngokomzekelo, siza kubeka iYuro malunga neyure yase-UK (EUR / GBP) njengombini weebhanki encinci, nangona ithengiswa kakhulu kwaye isasazeka sihlala siphantsi. Idola yaseNew Zealand kunye ne-US Dollar (i-NZD / i-USD) ingahle ibekwe njengelinye lembini yemali, nangona ikwabekwa "njengombini wezimpahla".
Isicwangciso sokurhweba esivumela abatyali-mali ukuba 'bajonge urhwebo' nabanye abathengisi be-forex kunye nabatyalomali. Bayiza kubhala ngokukodwa iirekhodi zabanye abatyali-mali abaza kubonakalisa kwiakhawunti yabo yorhwebo.
Inyanga-ngenyanga. Ukusetyenziswa kokubhaliweyo ukubala ipesenti yeenguqu kumanqaku ngexesha lenyanga.
Eli gama lisetyenziswe xa umthengisi eqwalasela kuphela isixa-futshane senkqubela-ntlawulo yexabiso, kungekhona izinto ezisisiseko. Esi sicwangciso sisekelwe kuphela ekukhawulezeni.
I-Market Market Hedge
Umcengeko wemarike yemali yindlela yokukhusela ukuchithwa kwemali kunye nokuvumela inkampani ukunciphisa ingozi yemali xa usenza ishishini nenkampani yangaphandle. Ngaphambi kokuqhuba umthengi, ixabiso lemali yeenkampani yangaphandle lizakuvalwa, ukwenzela ukuba kuqinisekiswe iindleko zokuthengiswa kwexesha elizayo kwaye kuqinisekiswe ukuba inkampani yasekhaya iya kuba nexabiso elinamandla kwaye likulungele ukuhlawula.
Ukuhambisa Umyinge (MA)
Ichazwe njengendlela yokululaza isethi yamanani / intlawulo yedatha ngokuthatha ixabiso eliqhelekileyo lovimba bexabiso lolwazi.
Oku kwenzeka xa kukho ukuthengwa kwexabiso elisezantsi kwiimarike kodwa ukuchithwa okukhulu kwamanani kunye nokusabalala okuphezulu. Kwimakethi emncinci ngokubanzi kukho inani elincinci le-bid / askings offer.
Ichazwe njengomdla ongathandekiyo (SWAP) ohamba phezu kwesithuba ngobusuku bobusuku.
Kwindlela yokwenza iipatheni zokutshintshwa, isiseko seNtloko kunye neNgxowa okanye into echaseneyo.
Umlinganiselo woNyaka woNyaka
Lo umehluko kwixabiso lentengo evela kumazwe amabini ahlukeneyo. Umzekelo, ukuba umthengisi ude nge-EUR / USD, ngoko unayo i-Euro kwaye uboleka imali yase-US. Ukuba ireyithi elandelayo kwiYurophu yi-3.25% kwaye izinga elilandelayo / elilandelayo kwi-US ngu-1.75%, ngoko umlinganiselo wohlula ngu-1.50% (3.25% - 1.75% = 1.50%).
Ichazwe njengendlela yokulungisa, phantsi kwayo kuphela ukungafani kwiimali ezithengiswayo ekupheleni.
Isikhundla esiphezulu yintengo ethengiweyo okanye ithengiswayo engafani nxamnye nesikhundla sobukhulu obulinganayo.
Ichazwa njengezinto eziphathekayo ezingenakutyala. Unokuphinda uhanjiswe njengempahla ekhoyo.
Iseshoni saseNew York
Iseshoni yokuhweba phakathi kwe8: 00 E-EST '5: 00 PM EST. (Ixesha leNew York).
Kuthathwa njengefomati yedata esetyenziswe kwiindawo zokurhweba zokubonelela abasebenzisi ngokuqulathe umxholo.
Akukho Ding Dek (NDD)
I-FXCC "ayikho idesksi esebenzayo". I-NDD ichazwa ngokungenazo ukufikelela kwiimarike ze-interbank, apho iimali zelizwe langaphandle zithengiswa. Abaxhasi bee-Forex basebenzisa le miyalelo yendlela yokumisela ngokuya kumashishini athengisa imali, kunokuba bajongane nomboneleli omnye. Umyalelo womthengisi unikezelwa kubanikezeli abaninzi, ukuze bafumane ibhanti yokukhuphisana kakhulu kwaye babuze amaxabiso.
Leli gama elisetyenziselwa ukucacisa ukuhamba kwamanani athile awanakho ukuchazwa ngemigangatho ebalulekileyo okanye yobugcisa.
Idata yesitatisti ehlanganiswe yi-US Bureau of Labor Statistics, ehambelana nedatha yokubhalwa kwintlawulo yeninzi ye-United States. Akwabandakanyi: abasebenzi basefama, abasebenzi basekhaya bangebodwa, okanye abasebenzi abangenanzuzo. Yisalathisi esibalulekileyo esakhutshwa ngenyanga.
Ixabiso lentengiso kwi sixhobo semali kukubaluleka kwesimo kwiimali zeedola.
Yisicatshulwa seDola laseNew Zealand kunye nediresi yemali yaseDola yaseMelika. Ibonisa kubathengisi inani leedola zase-US ezifunekayo kodwa enye idola yaseNew Zealand. Ukurhweba i-NZD / USD ibhanki yegama eliqhelekileyo libhekisela ngokuba "ukuthengisa i-Kiwi".
I-OCO Order (One Cancel Other Order)
Uluhlobo lomyalelo apho ukuma kunye nokunciphisa umyalelo lubekwa ngexesha elifanayo kwaye ukuba nayiphi urhwebo lwenziwa, enye iya kukhutshwa.
Le yintengo apho umthengisi ekhangele ukuthengisa imali. Esi siphakamiso sibizwa ngokuba yixabiso lokubuza.
Yiyo imeko enokuthi ivele kwi-market forex, edla ngokukhawuleza kwaye imele ukuba kwenzeke apho inani labathengisi abathengisa isixhobo lidlula inani labathengisi abazimisele ukuthenga.
Lo urhwebo olususa ukususa, okanye ukunciphisa ezinye, okanye yonke ingozi yemarike kwindawo evulekile.
Indoda endala yaseTurneedle Street, igama kwibhanki enkulu yaseNgilani.
I-akhawunti phakathi kwabathengisi ababini apho i-akhawunti nganye kunye neentengiselwano zihlanganiswa kwi-akhawunti ye-omnibus, kunokuba ikhethwe ngokwahlukileyo. Umthengisi wexesha elizayo uya kuvula le ngxelo kunye nenye inkampani, apho ukuqhutyelwa kwamagcisa kunye nokusebenza egameni lomnini-akhawunti kubanjwe.
Ukushintshwa Kwemali Ekhompyutha
Ichazwe njengenkqubo ye-intanethi evumela ukutshintshaniswa kweentengo zeentlanga. Imarike ye-Forex ikwasetyenzana kwaye iyinkqubo yeekhomputhaza ezidibanisa ibhanki, ukuthengisana kwemali ye-intanethi kunye nabarhwebi be-forex abavumela ukuhanjiswa kweemali zorhwebo.
Ukuzama ukufutshane mfutshane, kwixabiso lemarike langoku.
Isixa sonke seemvumelwano ezixhaswanga ezibanjwe ngabachaphazelekayo bemarike ekupheleni kwayo yonke imihla yokuhweba.
Kuchazwa nje ngomyalelo oya kuqhutywa emva kokuba i-marhwebo ihamba kwaye ifinyelele kwixabiso elithethiweyo.
Naliphina isikhundla esivulwe ngumthengisi ongavaliwe ngolu hlobo olufanayo okanye oluphambene nolu hlobo olufanayo.
Ifayile evulekileyo yefowuni
Iwindow yeFXCC ebonisa zonke iindawo ezikhoyo zesiklayenti ezivulekileyo.
Imiyalelo ichazwa njengomyalelo ovela kumthengi ukuba athenge okanye athengise ididi ethile yemali, ngokusebenzisa i-platform ye-FXCC yokurhweba. Imiyalelo ingasetyenziselwa ukuba ikhutshwe kwakhona, xa intengo yemarike ifinyelela kwixabiso elimiselweyo lomthengi.
I-OTC yokuTshintshiselana kwamazwe angaphandle
Ngaphezulu kwe-counter (ekutshintshiselwano) kwiimarike zerhwebo lwangaphandle, apho abathathi-nxaxheba bemarike, njenge-FXCC kunye nabaxumi, bangena kwiikontraki ezixutywayo ngasese, okanye ezinye iintengiso ngokuthe ngqo kunye nomnye, apho i-margin ifakwe kuyo kwaye ifungelwe kwizikhundla ezibalaseleyo.
Isiganeko xa ilizwe likhula ngokukhula kwezoqoqosho ngexesha elide, kubangele ukukhula kweemfuno ezikhulayo ezingakwazi ukuxhaswa kunye nezoqoqosho ezinokuvelisa, ezinokubangela ukukhula kwezinga lentengo kunye nokunyuka kwamaxabiso.
Ichazwe njengento ekhoyo ukususela namhlanje kuze kube ngumhla webhishini olandelayo.
Ubume buba khona xa intengo ye-asethi ifana nexabiso lesinye i-asethi, umzekelo; ukuba i-euro enye ifana ne-dollar yase-US. Ingqiqo "yexabiso lobudlelwane" isetyenziselwa ukugcina iimpahla kunye neempahla, ukuba izinto ezimbini zixabiso elilinganayo. Abahwebi bebhondi be-convertible bangasebenzisa ingqiqo yamanani, ukuze baqaphele ukuba kuyinzuzo ukuguqula ibhondi kumaxabiso.
I-pip ichazwa njengentengo encinci yokunyuka kwexabiso elinikezelwa ngentengo yokutshintshiselwa, ngokusekelwe kwintlanganiso yemakethi. Uninzi lweebhanki ezinkulu zeemali zithengwa kwiindawo ezine zokugqibela, utshintsho oluncinci lulo lukugqibela lokugqibela. Kwiimbini ezininzi, eli lilingana ne-1 / 100 ye-1%, okanye enye inqaku lesiseko.
Ukubaluleka kombhobho ngamnye kwizorhwebo elinikeziweyo, eliguqulwa libe ngumthengisi we-akhawunti ye-akhawunti.
Ixabiso lePip = (enye yepip / izinga lokutshintsha).
Oku kuthathwa njengama-oda angakhuselekanga alindile kwaye elindele ukufezwa, ngelixabiso elinqunywe ngumthengi.
Ukubonakaliswa kwenguqu kumgaqo-karhulumente onokuba nefuthe elichasayo kwisimo somtyalo-mali.
Ukunyuka okufutshane okanye ukunyuka okuncinane kwintengo yokuhamba.
Ichazwe njengezibophelelo ezipheleleyo zeemali kwimali enikwe. Isikhundla sinokuba isitrato, okanye isikwere (akukho ukuchayeka), ixesha elide, (imali ethe xa kuthengwa kunokuba ithengiswe), okanye imfutshane (imali ethengiswayo ngaphezu kokuthengwa).
Inzuzo ye-NET positive (SWAP) yokugcina isikhundla sivulwe ngobusuku.
IPound Sterling (iC Cable)
Ezinye iinkcukacha zebhanti ye GBP / USD.
Ixabiso apho i-asethi okanye imali engaphantsi kwayo ingathengiswa okanye kuthengwa.
Isiteshi sexabiso sakhiwe ngokubeka imigca emibini efanayo kwitshathi yesitya esifuna. Kuxhomekeke ekubeni ngaba ukunyuka kweemarike, ishaneli inokwenyuka, ihla okanye ingqamle. Imigqa isetyenziselwa ukudibanisa iindawo eziphezulu kunye ne-lows, apho umgca ophezulu umela umgangatho wokumelana kunye nomgca ongaphantsi umele inqanaba lokuxhasa.
Oku kukuhamba kwemali yeemarike (ixesha langempela, okanye ukulibaziseka).
Ubonisa iicatshulwa zemarike ukuba ngamnye umthengi inxaxheba unokufikelela okulinganayo.
Kubhekiswa njengento eqhubekayo yokunyuka kwamaxabiso ngendlela ethile.
Isilinganiso esetyenzisiweyo sokubala amaxabiso okuboleka ngamabhanki ase-US.
I-Index Price Producer (PPI)
I-PPI ilinganisela ukutshintsha kwexabiso kwizinga elipheleleyo lebhakethi echanekileyo yentengo, umvuzo wabathengi omhle owenziwe ngabavelisi, kwaye wenza njengendlela yokubonisa utshintsho lwexabiso lokuthengisa.
Ukuvalwa okanye ukuhlengahlengiswa kwesimo ukwenzela ukufumana inzuzo.
Iikhomputha zokuThengwa kweeNtengo (PMI)
Isalathisi sezoqoqosho esilinganisela amandla oqoqosho kwicandelo lokuvelisa. Ngokuqokelela uphononongo lwenyanga nganye. Abaphathi be-300 abathengi, banikezela ngolwazi lweemeko zoshishino kwaye benza njengesixhobo sokwenza izigqibo kubaphathi.
I-PSAR, I-Stop Parabolic Stop and Reverse (SAR)
Yisalathisi esisetyenziselwa ukuchaza ukuyeka ukuhamba kwezikhundla ezimfutshane nezide. I-SAR yindlela elandelayo yenkqubo.
Ikota ngekota. Isiqhelo esisebenzisiweyo sokubala ipesenti yeenguqu kwiindidi ezahlukeneyo.
Ingumgaqo-mali owenziwe yiBhanki Ephakathi ukunciphisa amaxabiso omyinge nokunyusa imali ngokuthengwa kweemali ezivela kwimarike. Le nkqubo ijolise ukunyusa ngokuthe ngqo ukusetyenziswa kwecandelo labucala kwizoqoqosho kunye nokubuyisela ukunyuka kwamaxabiso okujoliswe kuwo.
Iqulethe ibhidi kwaye icele ididi yemali.
Njengoko ukuhweba i-Forex kubandakanya iibhanki zemali, ixabiso lokubhalwa kwemali limela imali yesibili kwibini.
Umzekelo; nge-EUR / GBP, ipondo yase-UK yi-currency quote kunye ne-euro yi-currency base. Iingcaphuno ezichanekileyo, imali echongiweyo ihlala ivela kwemali yangaphandle. Ngeengcaphuno ezingqalileyo, ixabiso lemali lihlala liyimali yasekhaya.
Lixesha eliqhubekayo lokunyuka kwindleko ye-asethi.
Ububanzi bunokuchazwa njengomdahluko phakathi kwexabiso eliphezulu kunye nexabiso eliphantsi lwemali, isivumelwano esizayo okanye inkcazo ngexesha lokunikezelwa kwexesha. Kwakhona kubonisa inkqubela yexabiso lempahla.
Ukurhweba kwamashishini kubonisa xa ixabiso lichithwa ngaphakathi kwendlela kunye nokusebenzisa uhlalutyo lobugcisa, ukuxhaswa ngokukodwa kunye namanqanaba okumelana nawo angabonwa, ukuvumela umthengisi ukuba enze isigqibo sokuthenga okanye ukuthengisa nesixhobo kuye kuxhomekeke ukuba ixabiso likufuphi isiteshi okanye kufuphi naphezulu.
Ukuchazwa njengendleko yemali enye ngokweminye, ngokuqhelekileyo malunga ne-USD.
Ukusetyenziswa kweP / L
Le yinzuzo kunye nokulahlekelwa okuvela kwizikhundla ezivaliweyo.
Ukuchazwa njengembuyekezo yeyona nxalenye yentlawulo yentsusa yeyona nkonzo (umzekelo, ikhomishini ye-Forex / isaphulelo sokusasazeka).
Ukubuya kwakhona kubhekisela kwimeko xa uqoqosho lwelizwe lucotha kwaye wena ukuhla kwezenzo zoshishino.
Le yimarike elawulwayo, ngokuqhelekileyo yi-arhente karhulumente eyenza inani leenqununu nezithintelo ezenzelwe ukukhusela abatyalo-mali.
Ubudlelwane bamandla obuhlobene
Xa amaxabiso kumazwe ahlukahluka kumveliso ofanayo kwizinga elilinganayo ngokwexesha elide. Izizathu zohluko lwamaxabiso lungabandakanya: irhafu, iindleko zokuthumela kunye nemilinganiselo yemigangatho yemveliso.
I-oscillator yomzuzwana, okuyikhokisi ekhokelayo. Ukulinganisa amandla kunye nobuthathaka ngokwemali yokuvala kwixesha elithile elirhwebiweyo.
Ibhanki ye-Reserve ye-Australia (RBA)
I-Central Bank yase-Australia.
Ibhanki ye-Reserve ye-New Zealand (RBNZ)
Inkulu yeBhanki yeNew Zealand.
Imeko yemarike eyenzekayo xa umtyalo-mali eqala urhwebo ngexabiso elithile, kodwa umthengisi ubuyisela isicelo ngesicatshulwa esahlukileyo. I-FXCC inikezela abathengi bayo ngokufikelela ngqo kwi-Forex ye-ECN imodeli ye-ECN apho bonke abathengi bafumana ukufikelela okufanayo kumashishini afanayo kunye nokuhweba kwenziwa ngokukhawuleza, ngaphandle kokulibaziseka okanye ukuphindaphinda.
Ngokuqhelekileyo kuthiwa "iindawo zokugcina" oku kunokuqwalaselwa: iimali, iimpahla, okanye enye imali eyimali, ebanjwe ngabaphathi bemali. Umzekelo; Iibhanki eziphambili zingasebenzisa iindawo zokugcina iimali ukuze zenze imali: ukungalingani kwezentengiselwano, ukulawula impembelelo ye-FX ukuguqulwa kunye nokujongana nayiphi na imiba ibhanki ephakathi iyakusindisa. Iimpahla zokugcina impahla zihlala zimanzi kunye ngqo phantsi kolawulo lwegunya lokulawula imali.
Kucingwa ukuba ibe yindawo ekhuselekileyo yokufumana imali. Ngokuqhelekileyo kubanjwe ngamanani amaninzi ngamabhanki angundoqo ukuze kusetyenziswe ukuhlawula izibophelelo zamatyala ngamazwe ngamazwe.
Point Point, okanye iNqanaba
It isetyenziswe kuhlalutyo lobugcisa kwaye mhlawumbi ixabiso okanye izinga eliya kumisa ukunyuka kwezinga lokutshintshiselana kwamanye amazwe liya phezulu. Ukuba izinga liphulwa, ngoko kulindeleke ukuba intengo yesitya iya kuqhubeka iya phezulu.
Umthengisi wokuThengiswa kwamaZwe angaphandle -RFED
Kwiimeko apho ukuthengwa kwamanye amazwe okanye ukuthengisa izixhobo zemali akubandakanyi nayiphi na intsebenziswano, abantu okanye imibutho kufuneka basebenze njengeqela eliphikisayo. Izenzo ze-RFED kwiintengiso ezibandakanya iikhontrakthi zexesha elizayo, iinketho kwiikontrakthi zexesha elizayo kunye neenkontileka zokukhetha kunye nabathathi-nxaxheba abangafanelekanga abachaphazelekayo.
Umtyalomali woThengiso kunye noMthengisi weeRetail
Xa umtyalomali / umrhwebi uthengisa okanye uthengisa izibambiso, ii-CFD, i-currencies, amanani, njl njl. Kwiakhawunti yakhe, yena uthathwa njengomthengisi-ntengiso / umthengisi.
I-Index yoThengiswa kweeNtengiso (RPI)
Ingumlinganiselo wenguqu kwiindleko zokuthengisa iimpahla kunye neenkonzo. Ukongeza kwi-CPI, i-RPI nayo imilinganiselo yokunyuka kwamaxabiso kwelizwe elinikeziweyo.
Njengomlinganiselo osisiseko wezoqoqosho kunye nokubonakalisa amandla oqoqosho.
Ezi zixabiso lemarike zeemarike (ukusuka kwinqanaba elithile) zisetyenziswe njengexabiso elisezantsi ngabathengisi beemali ukugqiba ukuba ingahlawulwanga okanye ingeniso, okanye ukulahleka kuye kwagqitywa ngosuku. Ixabiso lokuhlaziywa ngokuqhelekileyo libhekwa njengelingqinisiso lokuvala lomhla wokuhweba wangaphambili.
Ukuhambelana nokubuza, okanye umrhumo wexabiso lokutshintshiselana kwamanye amazwe. Umzekelo; kwi-EUR / GBP xa sibona ixabiso le-0.86334 - 0.86349, icala lesokunene yi0.86349. Icala lasekunene linye icala elithengwa ngumthengi.
Ukuchazwa nje ngokuchasana nokutshintsha okungaqinisekanga, ukuhluka kweentlawulo, okanye ubuncipheko bokubuyisela ngaphantsi kwezinto ezilindelekileyo.
Xa kuthengiswa phambili, abahwebi kufuneka baqinisekise ukuba ababeka ingozi kwimali engaphezulu kuneemali ezibekwa bucala ukuze zenze ishishini. Umngcipheko mngcipheko ubhekisela kwisixa somthengisi uyaziva ekhululekile ngokutyalomali xa ecinga ngeembini zemali.
Kucatshangelwa njengokuhlalutya imarike yangaphambili kunye nokuchonga ilahleko ezikhoyo ezinokuthi zenzeke kunye notyalo-mali, ngoko kusebenzise iindlela zokurhweba ezinokukuncedisa ekunciphiseni umngcipheko wokutyalomali.
Ingqungquthela yengozi iyigama elisetyenziselwa iimrhumo okanye iindleko ezihlawulwayo ezisetyenziselwa ukuhlawula iqela ngokuthatha umngcipheko othile.
Xa isikhundla sigcinwe ngobusuku obubodwa, kwaye inzala ivela apho umthengi angahlawula okanye azuze kwindawo evulekile, kuxhomekeke kwinqanaba lentlawulo ehambelana nayo. I-FXCC iya kuhlawula okanye ityala ngeakhawunti yomthengi ngokuxhomekeka kwintlukwano yezinga lentengo phakathi kwemali yesiseko kunye nemali ye-counter kunye nesikhokelo sikhundla siklayenti. Umzekelo; ukuba umthengi udele ididi yemali njengoko ixabiso lokulala kwinqanaba lemali liphezulu kunexabiso lemali, umthengi uya kufumana isikhokhsi esincinci kwiindawo ezigcinwe ngobusuku. Ukuba kukho imeko echaseneyo, i-akhawunti yomxhasi iya kuxoxwa ngenxa yohlukwano kumlinganiselo wezinga lomdla. Ukuba umxhasi udele imali ephakamileyo evumelekileyo, kufuneka bazuze ngokukwazi ukutshala imali kwaye bafumane ukubuyiswa okuphezulu ngaphezu kobusuku kunokuba bafanele bahlawule ngokukhawulelana nemali engezantsi.
Kucaciswa njengento yokugcina izikhundla ezivulekileyo ezivulekileyo, ngokulindela inzuzo yokuqikelela.
Ngexesha loxinzelelo lweemarike okanye ingxubusho ye-geopolitical, utyalo-mali okulindeleke ukuba ugcine okanye ukwandise ukubaluleka kwalo, ubizwa ngokuthi 'indawo ephephile'.
Ngomhla woTshintsho loSuku
Ichazwe njengomthengi okhulayo ngomhla wokuthengiselana okwenzekayo.
Ichazwe njengeqhinga ngokusebenzisa iinguqu ezincinci kwixabiso. Umrhwebi unokunceda ngokuvula ngokukhawuleza nokuvala amaninzi amakhulu kwiindawo zezorhwebo.
Oku kuchaza ixabiso eliphantsi apho ukuthengiswa kwemali esekelwe kwimbini yezimali kungenziwa. Yimyalelo yokuthengisa iimarike ngelixabiso elingaphezulu kwexabiso langoku.
Ukuthengisa izitoreli ziyeka imiyalelo ecwangcisiweyo ngaphantsi kwexabiso lokuthengiswa kwamanje kunye kwaye ayilisebenzisi kude kube yintengo yexabiso lemarike, okanye ngaphantsi kwentengo yokuma. Thengisa i-oda yokuyeka, kanye neyayikhutshwe, iya kuba myalelo we-market ukuthengisa ngexabiso langoku.
Kuyithengiswa kwemali engekho kumthengisi.
Umhla wo kuhlala
Lo ngumhla apho umyalelo owenziweyo kufuneka ulungiswe ngokudluliselwa kwezixhobo, okanye iimali kunye nemali phakathi komthengi nomthengisi.
Ibonisa ukuba neendawo ezivulekileyo ezenziwe ngokuthengisa imali.
Kuyenzeka xa kukho ukunyaniseka okukhulu kwiimarike kwaye kuchazwa njengomlinganiselo phakathi kwexabiso elilindelekileyo kunye nexabiso elithe lafumaneka kwiimarike kwaye lisetyenziselwa ukuqhuba urhwebo. I-Slippage ayinakuhlala ihlala ingalunganga, kunye nabaxhasi beFXCC banokufumana ukuhluma okulungileyo, kwaziwa nangokuthi ukuphucula intengo.
Umbutho we-Interbank Financial Telecommunications (i-Swift) kwi-Worldwide.
Ukudluliselwa kwemali kunye neminye imisebenzi yezemali zenziwa nge-Swift, njengokuba kunxibelelwano lwenkqubo yokunxibelelana ngolwazi ngemali.
Isiganeko xa kukho abathengisi abaninzi kunabathengi, okukhokelela kumaxabiso aphantsi ngenxa yenkcitho engaphezulu kwemfuno.
Utyalo-mali oTshintshiselwano lwaMazwe angaphandle
Xa umtyalo-mali unolwazi olwaneleyo nolwazi lwemarike yokutshintshiselana kwamanye amazwe, ulindeleke ukuba ahlole ingozi yithuba lotyalo-mali.
Kuthunyelwa kumngcipheko xa urhulumente akakwazi okanye engafuni ukuhlangabezana nokuhlawulwa kwetyala.
Ukurhweba, umzekelo, ukutshintshiselana kwamanye amazwe kuyimfuneko; akukho siqinisekiso sokuba abo abatyala imali kwi-FX baya kuzuza kumava. Abaxhasi banokulahlekelwa ngumda wabo wonke odibeneyo, okwenza uFX uhlalutye kakhulu. Ezi zorhwebo zoshishino lwamazwe angaphandle zimele zongciphe ingxowankulu enokuthi ithathwa njengengxowankulu yengozi, ichazwa njengemali yokuba xa ilahlekile ayiyi kutshintsha indlela yokuphila yabaxhasi, okanye indlela yokuphila kwintsapho.
Isiganeko kwimarike ye-Forex ichazwa njengento efanelekileyo okanye engalunganga kwintengo yesenzo, edla ngokukhawuleza.
Iimarike zentengiso zakhele ngeendlela zokwenza iimali zemali ezithengiswa ngokukhawuleza kwaye imiyalelo iyanqanyulwa kwangoko, njengoko abathathi-nxaxheba kwindawo ye-market forex bengayifumana okanye bayinike imali ebonakalayo abayithengisayo.
Ixabiso lentengo / izinga
Ixabiso lentsimbi enokuthengiswa okanye kuthengwa kwi-marketplace.
IStot Setting Basis
Yinkqubo ehambelanisiweyo yokulungiswa kwemicimbi yokutshintshiselana kwamanye amazwe apho umhla wokubaluleka ususelwa kwiintsuku ze-2 zeentsuku ezihamba phambili ukusuka kuMhla woRhwebo.
Ukwahlula phakathi kwamaxabiso anikezelweyo ngokukhawuleza (cela intengo) kunye nentengiso esheshayo (intengo yebhidi) yeebhanki zemali.
Ingxaki yezoqoqosho kwilizwe apho kukho ukunyuka kwexabiso eliphezulu kunye neengxaki zokungabikho kwemisebenzi, kubangela ukukhula kancinci kwezoqoqosho nokunyuka kwamaxabiso.
Iimeko xa kungekho ndawo evulekileyo kunye nokuthengwa kwabaxumi kunye nokuthengiswa kusele.
Inqanaba eliqhelekileyo kwimigaqo yokurhweba phambili, lilingana neeyunithi ze-100,000 zemali yesiseko kwidibanisi yebhanki yokuthengisa. Inqanaba eliqhelekileyo lelinye lamatye amathathu aqhelekileyo ayaziwa, amanye amabini: i-mini-lot kunye ne-micro-lot. Inqanaba eliqhelekileyo iinqununu ze-100,000 zebhanki yemali, i-mini-lot ithetha i-10,000, iqela elincinane limele iinqununu ze-1,000 nayiphi na imali. Ukunyakaza kombhobho omnye kwinqanaba eliqhelekileyo kufana neenguqu ze $ 10.
Inzalo ichazwa njengoluhlobo lwemigaqo-mali, apho ibhanki ephakathi ibeka umda kwimiphumo yokungena kunye nokuphuma kwemali kwi-domestic supply supply. Inzalo iquka ukuthengwa okanye ukuthengiswa kweempahla zebhanki kwibhanki ephakathi, ukuphazamiseka kweziphumo zokungenelela kwamanye amazwe. Inkqubo yokuzalisa inkunkuma ichaza ukubaluleka kwemali yasekhaya ngokumalunga nomnye, iqaliswe kwimarike yerhwebo lwangaphandle.
Iipiliti zaseBrithani, enye into eyaziwa njengekhebula xa kuthengisa ibhanti ye-GBP / USD.
I Stochastic (Stoch) izama ukulungelelanisa ixabiso njengepesenti phakathi kwe-0 ne-100. Ngemizila ye-stochastic, imigca emibini iyalungelelaniswa, imigca yokuzila kunye neyokucotha i-stochastic lines. Yisalathisi esinobugcisa esithandwayo esisetyenzisiweyo abasetyenzisiweyo ukuba banqwenele amandla omoya.
Myalelo weNkunkuma yokuLawula
Lo ngumyalelo othile owenziwe ngumxhasi ukuvala isithuba ukuba ixabiso lihambelana nesikhokelo esithile kwimeko ethile yeepips. Kwiimeko ezininzi ukuyeka iilayiphu zokulahlekelwa ziyenziwa ngokukhawuleza xa i-marhwebo ifinyelela, okanye ihamba ngezinga lokumisa isethi. Emva kokuba kukhutshwe, umyalelo wokuyeka uya kubanjwa kuze kube yilapho kufikelelwe intengo yokuma. Yeka imiyalelo ingasetyenziselwa ukuvala isikhundla (ukuyeka ukulahlekelwa), ukuguqula isikhundla, okanye ukuvula indawo entsha. Ukusetyenziswa okuqhelekileyo kwemigca yokumisa kukukhusela isikhundla esele sikhona (ngokunciphisa ilahleko, okanye ukukhusela i-gains). Xa intengiso itshaywayo, okanye ihamba ngexabiso lokuyeka, umyalelo usebenze (kubangele) kwaye i-FXCC iya kwenza umyalelo kwixabiso elilandelayo elikhoyo. Yeka i-oda ayifuni isiqinisekiso sokuphunyezwa kwixabiso lokuyeka. Imiqathango yemarike kuquka ukungahambisani nokungahambi komthamo kungenza ukuba umyalelo wokumisa uqhutywe kwintengo eyahlukileyo kunomyalelo.
Yeka Ixabiso leNqanaba
Oku kuchazwa njengexabiso apho umthengi wangena kwixabiso elenza umyalelo wokulahleka kokuyeka.
Xa uqoqosho lunexesha elide lokungasebenzi, libizwa ngokuba yiNgqesho engasebenzi. Isizathu sinokubangelwa kwiinguqu ezibalulekileyo kwezoqoqosho ezibangelwa yimimandla eyahlukeneyo, njengeteknoloji, ukhuphiswano kunye nomgaqo-karhulumente.
Zisetyenziselwa uhlalutyo lobugcisa ukubonisa izinga lexabiso apho ixabiso lilindeleke ukuba linzima ukuphulaphula kwaye liya kuzilungisa ngokuzenzekelayo.
Imali echitshiyelwayo yinto yokuboleka kanyekanye kunye nokuboleka kwexabiso elifanayo lemali enikeziweyo kwizinga lokutshintshiselwa phambili.
Gweba / Ukulondoloza
Xa umxhasi weFXCC eneP / L kwelinye imali ngaphandle kweedola zase-US, i-P / L kufuneka iguqulwe ekupheleni komhla weentsuku zoshishino kwiidola zase-US, ngezinga lokutshintshisana elikhoyo ngexesha (eyaziwa njengezinga lokuguqulwa ). Le nqubo ibizwa ngokuthi ihluma. Ukuze i-P / L ikhutshwe, ixabiso leakhawunti yeklayenti liya kuguquka kancane (phezulu okanye phezulu), njengezinga lokutshintshiselwa ngenzuzo kunye nelahleko kunye neenguqulelo zemali. Umzekelo; ukuba umthengi unenzuzo kwi-yen, ukuba ixabiso le yen liphakanyiswa emva kokuba ivalwe isikhundla, kodwa ngaphambi kokuba inzuzo ihlulwe kwiidola, ixabiso le-akhawunti liya kutshintsha. Utshintsho kuphela kwi-profit / loss loss amount, ngoko umphumo awuncinci.
Umbutho we-Interbank Telecommunications kwi-World yonxibelelwano yinkampani yaseBelgium enikezela uxhulumaniso lwe-elektroniki yonxibelelwano lwe-intanethi yokuthengiselana kwamanye amazwe. Uluntu lunexanduva lokumisela iikhowudi zemali ezisetyenziselwa ukuqinisekiswa kunye nenjongo yokuchonga (okt USD = i-US Dollars, EUR = IYurophu, iJPY = iJapan Yen)
Le nguqulelo yeqhinga lokuthengisa elithintekayo eliphethe indawo evulekileyo ukusuka kwenye (ukuya kwiintsuku eziliqela) ngenzame yokuzuza kwiinguqu zenguqu, ezibizwa ngokuba yi 'swings'.
I-Market slang yeSwitzerland yaseFrank, i-CHF.
Ngulo myalelo obekwe ngumxhasi ngexabiso elichazwe ngaphambili xa amaxabiso emakethi afika kumgangatho oyifunayo, umyalelo uya kuvalwa. Emva kokuba umyalelo uzaliswe, kuya kubangela inzuzo kworhwebo olunikeziweyo.
Uhlalutyo lobugcisa lusetyenziswa kwimizila yexabiso lembali kunye neepateni kwizame zokuhlaziya isilathiso semali.
Kuchazwa nje ngokuba kwenzeka ukuhla kwexabiso lemarike xa kungekho sizathu esiyintloko sokwehla. Umzekelo uya kuba xa ixabiso libuyela kubuxhatshazo obuninzi emva kokugqitywa kwangoko.
Umlinganiselo phakathi kweendleko zelizwe langaphandle kunye neendleko zokungenisa.
Izikhombisi zezobugcisa zisetyenziswe njengomzamo wokuqikelela iindwendwe zeemarike ezizayo. Inxalenye ebalulekileyo yohlalutyo lobugcisa olusetyenziswa njengephetshana yetshathi kwaye lenzelwe ukuhlalutya ukunyuka kwexabiso elifutshane.
Ichazwa njengemarike apho kungekho baninzi abathengisi nabathengi, okuthi ngenxa yoko kunexabiso eliphantsi lokurhweba kwaye ukuthengiswa kwezinto ezikhoyo zixhobo eziphantsi.
Oku kuchazwa njengenguqu encinci kwixabiso, phezulu okanye phantsi.
Ngomso ozayo (Tom olandelayo)
Ngomso ngokulandelayo kubandakanye izikhundla ezivaliweyo ngosuku oluthile loshishino kwinqanaba lokuvala kwaye emva koko luvuliwe ngokulandelayo. Ukuhanjiswa kwezimbini (2) iintsuku emva komhla wokuthenga. Kuthengwa kunye nokuthengiswa kwemali ngokufanayo ukwenzela ukuba ugweme nayiphi na ukuhanjiswa kwangempela kwemali.
Imbali yokusebenza kworhwebo, ngokuqhelekileyo ichazwa njengengqungquthela yezivuno.
Lo ngumhla apho kwenziwa urhwebo.
Intlupheko yezorhwebo iyenzeka xa ilizwe linokungeniswa kwamanye amazwe ngaphandle kwamanye amazwe. Ingumlinganiselo wezoqoqosho we-balance balance trade and characterize ukuphuma kwemali yasekhaya kwimarike yangaphandle.
Ukuthenga okanye ukuthengisa nayiphi na impahla, iinkonzo kunye nezixhobo kunye namanye amaqela. Ukurhweba nge-Forex kunokuchazwa njengengcamango ekutshintsheni kwinqanaba lezemali zangaphandle.
Iidkski zokuthengisa ziyaziwa nangokuthi 'iidiski zokusebenzisana'. Yilapho ukuthengiswa nokuthengwa kwemali kwenziwe khona kwaye kunokufumaneka kwiibhanki, iinkampani zezemali, njl njl. Inokunika abahwebi ngokuphunyezwa kwangoko kwimiyalelo yabo.
Isicelo sesofthiwe apho umthengi anakho ukunika umyalelo wokuqhuba umthengi egameni lomthengi. I-FXCC-MT4 (iMetaTrader 4) ngumzekelo weqonga lokuthengisa.
Isitima sokulandelela sisetyenziselwa ukukhusela iimali ezivela kwiirhwebo ezithile ngokugcina uhwebo luvulwe kwaye luvumela ukuqhubela phambili inzuzo (inzuzo) ngokude nje ukuba ixabiso lihamba kwinqanaba elifunayo. Akusekwe kwisixa esinye kodwa ipesenti echaziweyo.
Oku kuthengwa, okanye ukuthengisa, umzekelo, inani lokutshintshiselana kwamanye amazwe ngenxa yokuphunyezwa komyalelo.
Le yindleko yokuthenga, okanye ukuthengisa isixhobo semali.
Lo ngumhla apho kuvela khona urhwebo.
Xa iinkampani zithatha inxaxheba kwezohwebo lwamazwe ngamazwe, umngcipheko abajongene nazo kukungabikho kwemali yokuthengisa, ukuba ixabiso lokutshintshwa kwemali liya kutshintshwa emva kokuba iqumrhu lifake izibophelelo zezemali.
Ulwalathiso lwemarike okanye intengo, ngokuqhelekileyo ihambelana namazwi: "Ukukhangela, ukuhamba, okanye i-side" (ukuhamba) kunye nokuba nexesha elifutshane, ixesha elide okanye ukuhamba kwangoko.
Olu luhlobo lokuhlalutya lobugcisa (isalathisi), nalo lubizwa ngokuba ngulo lugqithiso lwemiqathango. Imigca yokuhamba ingasebenza njengezixhobo ezilula zokubala, ukufumanisa indlela yokuziphatha ngokucwangcisa umgca ofanelekileyo kuwo wonke: i-lowest, ephezulu, okanye yokuvala kunye namaxabiso okuvula.
Ingeniso ifana nencazelo yevolumu kwaye ibonisa inani elipheleleyo lemali yazo zonke iintengiso ezenziwa ngexesha elithile.
Ingqungquthela ebonisa ibhidi kwaye icele intengo kwimarike yerhwebo lwangaphandle.
Leli gama lesithuba sokuvula.
Xa izinga lokutshintshiselwa kwemali lingaphantsi kwamandla alo okuthenga, kuthathwa njengento engabalulekanga.
Ipesenti yabasebenzi abasemsebenzini.
Ukungabonakaliyo P / L
Lixesha elifanelekileyo ngenzuzo okanye ilahleko elinikeziweyo kwizinga lokutshintshiselwa kwamanje. Umzekelo, ukuba umthengi anqume ukuhamba kwirejista yebhanki ethile yemali, uya kufuneka athengise ngentengo yexabiso kwaye i-P / L engagqitywanga ingagcinwa de kubekwa indawo evuliwe. Xa ivaliwe, i-P / L iya kubandakanywa okanye ichithwe kwimali eseleyo kwidiphozithi, ukwenzela ukufumana imali entsha kwi-deposit amount.
Le yintengo entsha yexabiso elisexabiso eliphezulu ngokubhekiselele kwisicatshulwa esandulelayo.
I-Prime Prime Rate yase-US
Inzala yemali esetyenziswe ngamabhanki ase-US ukuboleka abathengi babo okanye abahwebi bequmrhu eliphambili.
Le yithenda esemthethweni ye-United States yaseMerika, emele i-USD xa iqhuba ukuthengiselana kwamanye amazwe.
I-USDX, i-US Dollar Index
Inkcazo ye dola (i-USDX) ilinganisa ixabiso ledoli yase-US ngokubaluleka kwebhakethi yee-currencies ze-USA. Okwangoku, le nkcazo ibalwa ngokufaka imali yokutshintshisiswa kweemali ezi-6 ezinkulu zelizwe: i-euro, iJapan, i-dollar yaseCanada, i-pound yaseBrithani, i-krona yesiSweden ne-Swiss franc. I-euro inesisindo esininzi ngokubhekiselele kwidola kwi-index, eyenza i-58% yexabiso elilinganisayo, elilandelwa yi yen kunye ne-14%. Isalathisi saqala kwi-1973 ngesiseko se-100, ixabiso ukusuka ngoko lihambelana nale siseko.
Yimodeli ekuthethwa ngayo ngabahlalutyi bezobugcisa, apho kubonakala njengombonakaliso wokuguqulwa kwezinto.
Ngumhla apho utshintsho lweentlawulo phakathi kwabalingani bokuthengiselana kwemali kwenzeka. Usuku lokukhula kwintsebenzo lwemali yeendawo ziqhelekileyo iintsuku ezimbini zoshishino (2) ukususela apho ivuliwe.
I-VIX iyisimboli sekhayibhile ye-CBOE Volatility Index, umlinganiselo oqhelekileyo wezinto ezinokuthi zenzeke kwi-SPX yenkcazelo yeenkcukacha; I-VIX ibalwa yi-Chicago Board Options Exchange (CBOE). Ukuba ukufundwa kweVIX kuphakamileyo ke abatyali-mali kunye nabathengisi bakholelwa ngokwenene ukuba umngcipheko wokuhweba uphakanyisiwe; ukuba iimarike ezilinganayo ezisemgangathweni zingaphantsi kwexesha lokutshintsha. I-VIX isinika inqanaba eliphambili lokuphambukiswa kweentsuku ezingamashumi amathathu zokuhamba kwonyaka kwi-SPX. Ngokomzekelo, ukufundwa kwe-20% kulindeleke ukuba i-20% ihambe, iphakame okanye ihambe, ngeenyanga ezilishumi elinesibini ezizayo.
Ichazwe njengomlinganiselo wexabiso lokunyuka kwexabiso, enokulinganiswa ngokusebenzisa ukuphambuka okuqhelekileyo okanye ukungafani phakathi kokubuyiswa kwesixhobo esifanayo.
Ukubalwa kwexabiso lemali yokuthengisa ethile ethile: ukulingana, imali yeebini, impahla, okanye inkcazo. Ngamanye amaxesha kuthathwa njengenani elipheleleyo leemvumelwano ezithengiswa ngemini.
Ichazwa nje ngokuba "iseva yangasese yangasese". Ukufikelela okuzinikezelwe kumncedisi ode, ovumela abahwebi ukuba balayishe kwaye baqhube ii-EAs zabo kude, bakwazi ukuthengisa i-24 / 5 ngexesha lokunciphisa ixesha elide, ngaphandle kokufuna ukuba iikhomputha zabo zitshintshwe. Inkonzo ngeFXCC inikezelwa nguBeeksFX.
Yenza i Pattern Pattern
Le pateni ibonisa ukuguqulwa komgangatho, okwakhiwa okwangoku kwinqanaba. I-Wedges ifana nesimo sexantathu, sinenkxaso kunye neendlela zokunyamezela. Le patheni iphethini iphethini lexesha elide elibonisa uluhlu lwexabiso elincinci.
Ukuchazwa njengemeko yeemarike ezithintekayo, apho ukunyuka kwexabiso elibukhali kulandelwa ngokukhawuleza ngokuguqulwa okubukhali.
Imele ukuba kwenzeke xa imali ibolekeke ngokubanzi kwiziko lezemali kunye neebhanki, kunokuba ixabiso elincinci ngokuthe ngqo kubalimi abancinci.
Ingumlinganiselo webhakethi yommeleli weempahla eziqhelekileyo kunye nomlinganiselo wenguqu kwixabiso lokuvelisa nokusabalalisa uqoqosho. Izihlandlo zikhokelela kwixabiso lexabiso labathengi nge-60 kwiintsuku ze-90. Ukutya kunye neendleko zoshishino zihlala zihlulwe ngokwahlukileyo.
Usuku lo ku sebenza
Umhla xa iibhanki kwiziko lemali lezemali livulekileyo kwishishini, umzekelo, iholide yebhanki e-US, njengosuku lokubonga, lithetha ukuba akusiyo imini yokusebenza nayiphi na ibini elicatshulwayo e-USD.
IBhanki ye hlabathi
Liziko lemali elizwe ngamazwe elibandakanywa ngamalungu e-IMF encedisayo ekuphuhlisweni kwamanye amazwe ngokulungiselela iimali-mboleko apho ingeniso-mali yangasese engekho.
Eyaziwa ngokuba ngumnikezeli wezorhwebo okanye umthengisi wesikhundla semali.
I-slang engaqhelekanga isetyenziswe kwisigidi sezigidi.
Ukuchazwa njengokuba kubuyiselwa imali yotyalo-mali.
Ngulo mgca owenza ixabiso lentengo kwinqanaba elithile ngexesha apho izixhobo zinomgangatho ofanayo weebhanki kodwa zifutshane okanye zixesha elide lokukhula. Isetyenziselwa ukunika ingcamango yomsebenzi wezoqoqosho okulindeleke kwixesha elizayo, kunye nokutshintsha kwezinga lomdla.
Ngonyaka-ngonyaka. Isiqhelo esisebenzisiweyo sokubala ipesenti yeenguqu kumanqaku ngaphezu kwonyaka wonyaka / ngonyaka.